hypothalamic-pituitary-adrenal axis (၂၀၀၆) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်က Pain On
Pharmacol ဗျာ 2006 Mar;58(1):46-57.
Spinazzi R ကို1, Andrei PG, ရော့စီမိသားစုဆရာဝန်, Nussdorfer GG.
Orexin-A နှင့် orexin-B ကနှစ်ခု, G ပရိုတိန်း-coupled receptors ကနေတဆင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ကြောင်း hypothalamic peptides, အမည်ရှိ orexin အမျိုးအစား 1 နှင့်အမျိုးအစား2receptors (OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး) ဖြစ်ကြသည်။ orexins ၏အများဆုံးလေ့လာခဲ့ဇီဝလုပ်ငန်းဆောင်တာနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း၏ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ကြပေမယ့်အတိတ်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွေ့ရှိချက်များကို orexin စနစ်ကနှစ်ဦးစလုံးသည်၎င်း၏ဗဟိုနှင့်အရံအကိုင်းအခက်ပေါ်မှာသရုပ်ဆောင်, အ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး modulates အကြောင်း, စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ Orexins နှင့်၎င်းတို့၏ receptors pituitary corticotropes, adrenal cortex နှင့် medulla အတွက် hypothalamic paraventricular နျူကလိယနှင့်ပျမ်းမျှထူးမြတ်သောနှင့် orexin receptors အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ adrenal aldosterone Secret အပေါ် orexins ၏သက်ရောက်မှုသံသယဖြစ်ကြသည်သွားရမည်အကြောင်း, ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားသည်ဤ peptides ကြွက်များနှင့်လူသားတွေအတွက် glucocorticoid ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီအကြိုးသကျရောတစ် 2-ခြံယန္တရားကပါဝင်ပတ်သက်: အလှည့်အတွက် adrenal glucocorticoid Secret ပေါ်ပေါက်ရသော adrenocorticotropin ၏ adrenocorticotropin-releasing ဟော်မုန်း-mediated pituitary လွှတ်ပေးရေး 1) ဆွ, အဆိုပါ adenylate cyclase-မှီခိုအဆငျ့ဆငျ့မှ coupled OX2-ရူပီးကနေတဆင့် adrenocortical ဆဲလ်များနှင့် 1) တိုက်ရိုက်ဆွ။ adrenal medulla ကနေ catecholamines လွှတ်ပေးရေးအပေါ် orexins ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းအသေးစားဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် orexins အဆိုပါ phospholipase ကို C-မှီခိုအဆငျ့ဆငျ့မှ coupled OX2-ရူပီးကနေတဆင့်လူ့ pheochromocytoma ဆဲလ်စသည်တို့ Secret အတွက်လှုံ့ဆော်နိုင်သောလက္ခဏာများရှိပါသည်။ သက်သေအထောက်အထား orexins အဓိကအား OX2-ရူပီးကနေတစ်ဆင့်သရုပ်ဆောင်, adrenocortical ဆဲလ်စသည်တို့အတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, တွေ့ရှိချက် orexin စနစ်ကဖိစီးမှုမှ HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုမျက်နှာသာနဲ့ Cortisol-secreting adrenal adenomas ၏ pathophysiology တစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Orexins A နှင့် B 1998 အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနှစ်ခုလွတ်လပ်သောအုပ်စုများအားဖြင့်ကြွက် hypothalamus ကနေခွဲထုတ်ခဲ့ neuropeptides (များမှာde Lecea et al ။ , 1998; Sakurai et al ။ , 1998) ။ သူတို့ဟာမူလကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ hypothalamic ပြည်တွင်းနှင့် secretin ၎င်းတို့၏ထင်ဆငျတူ hypocretins အမည်ရှိခဲ့ကြသည်။ အဲဒီနောကျသူတို့ရဲ့အမည် hypothalamic နို့တိုက်ကျွေးရေးစင်တာများမှာသူတို့ရဲ့မြင်သာထင်သာစကားရပ်နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ထိန်းချုပ်မှုမှာသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အခြေခံပေါ်မှာ orexins သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း orexins ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အတူဤ endogenous ligands နှစ်ခု, G ပရိုတိန်း-coupled receptors OX1-ရူပီး (စုံစမ်းစစ်ဆေး၏တူညီသောအုပ်စုများကဖော်ထုတ်နှင့် orexin အမျိုးအစား2နှင့်အမျိုးအစား 1 receptors ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြ1 နှင့် OX2-ရူပီး) ။ နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ (nonfunctional OX2-ရူပီးနှင့်အတူ orexin ဗီဇနောက်ကောက်ကြွက်နှင့်ခွေးကြောင့် orexin စနစ်ကလည်းကြောင့်ဗီဇ mutation display ရဲ့အိပ်စက်ခြင်း / နိုးနိုးကွားကွား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် narcolepsy ကဲ့သို့အခွအေနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြောင်းပြသChemelli et al ။ , 1999; Lin က et al ။ , 1999), နှင့် narcoleptic လူသားမြားသညျ (အ cerebrospinal fluid အတွက် orexin ပါဝင်သောအဆိုပါ hypothalamus အတွက်အာရုံခံခြင်းနှင့် orexins ကင်းမဲ့Nishino et al ။ , 2000; Peyron et al ။ , 2000; Thannickal et al ။ , 2000) ။ အများအပြားကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သုံးသပ်ချက်များ (Meier, 1998; ဝံပုလွေ, 1998; de Lecea နှင့် Sutcliffe, 1999; Sakurai, 1999, 2005; ရှံဆုန်နှင့် Resch, 2000; Hung နှင့် Mignot, 2001; Mignot, 2001; Siegel et al ။ , 2001; Taheri နှင့် Bloom, 2001; ဝီလီ et al ။ , 2001; Beuckmann နှင့် Yanagisawa, 2002; Kukkonen et al ။ , 2002; ဖာဂူဆန်နှင့်ရှံဆုန်, 2003) နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် orexin စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး (အဖြစ်, သွေးဖိအားစည်းမျဉ်းများနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့် neuroendocrine ပုဆိန်အပါအဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဗဟိုဆွအတွက် orexin စနစ်၏တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍ, အကြံပြု ရှံဆုန်နှင့် Resch, 2000; Taheri နှင့် Bloom, 2001; Kukkonen et al ။ , 2002; ဖာဂူဆန်နှင့်ရှံဆုန်, 2003; တေလာနှင့်ရှံဆုန်, 2003; Jöhren et al ။ , 2004) ။ ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားများအစာကျွေး၏ဗဟိုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု neuropeptides [ဥပမာ leptin, neuropeptide Y ကို (NPY), neuropeptide W နှင့် cholecystokinin] ကိုလည်း HPA ရဲ့ဗဟိုဌာနခှဲကိုထိန်းချုပ်စုဆောင်းထားပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကနောက်ဆုံးတွေ့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ် ဝင်ရိုး (Crawley နှင့် Corwin, 1994; Krysiak et al ။ , 1999; Ahima နဲ့လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေ, 2000; Wauters et al ။ , 2000; Baker et al ။ , 2003; Malendowicz et al ။ , 2003) ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော peptides, တိကျတဲ့ receptors မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်ကိုလည်း HPA ဝင်ရိုး (၏အရံဌာနခွဲတိုက်ရိုက်စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုတွေ့ရှိပြီBornstein et al ။ , 1997; Glasow et al ။ , 1998; Pralong et al ။ , 1998; Glasow နှင့် Bornstein, 2000; Malendowicz et al ။ , 2001c; Renshaw နှင့် Hinson, 2001; Hochól et al ။ , 2004; Mazzocchi et al ။ , 2004, 2005; Nussdorfer et al ။ , 2005; Spinazzi et al ။ , 2005a) ။ ထို့ကြောင့် orexin စနစ်၏ဇီဝဗေဒ၏အကျဉ်းအကောင့်ပြီးနောက်ကျနော်တို့ဤနေရာတွင်ကြောင်း orexins ညွှန်ပြတွေ့ရှိချက်လေ့လာပါလိမ့်မယ်, အစားအစာစားသုံးမှုပြောင်းလဲပစ်အခြား peptides ကဲ့သို့ဇီဝကမ္မနှင့်ရောဂါဗေဒအခြေအနေများအောက်၌ adrenal gland ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့စည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။
II ကို။ Orexins နှင့်သူတို့၏ receptor ၏ဇီဝဗေဒ
A. အ Orexin Biosynthesis
Orexins တစ် 130-131 အမိုင်နိုအက်ဆစ်ရှေ့ပြေးလူသားများနှင့်ကြွက်အကြားတစ်ဦး 83% အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဝိသေသလက္ခဏာပြသကြောင်း prepro (စစ) -orexin ၏ post ကို-translation cleavage များမှဖြစ်ပါသည်။ လူ့စစ-orexin ဗီဇ (ခရိုမိုဆုန်း 17q ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနှင့်နှစ်ခုသာ exons နှင့်တစ် intron ပါဝင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်Sakurai et al ။ , 1999) ။ အဆိုပါ N-terminal ကို 33-အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကျန်ကြွင်း signal ကို peptide, စစ-orexin (ယခုလိုလားသူ orexin) ၏ငျးကှာတဦးတည်းမော်လီကျူး orexin-A နှင့် orexin-B က (တစ်ဦးချင်းစီလိုက်လျောဖို့ prohormone convertases အားဖြင့်မှီဝဲပြီးနောက်သဖန်းသီး။ 1).
scheme စစ-orexin ၏ Post-translation process သရုပ်ဖော်။ အဆိုပါ arrowheads signal ကို peptide (SP) ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်, လိုလားသူ orexin ရင့်ကျက် orexin-A နှင့် orexin-B ကိုထုတ်လုပ်ရန်အခြေခံအမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန် (GKR နှင့် GRR) နဲ့က်ဘ်ဆိုက်များမှာ prohormone convertase အားဖြင့်မှီဝဲရာ, ထိုက်ဘ်ဆိုက်များဖော်ပြသည်။
Orexin-တစ်ဦးကအဆိုပါ 33 နှင့် 3.5 နှင့်6နှင့် 12 ရာထူးအတွက်ကပ်လျက် cysteine ​​အကြွင်းအကျန်များအကြားတစ်ဦး N-terminal ကို pyroglutamyl ကျန်ကြွင်း, C-terminal ကိုကြားတွင်, နှစ်ယောက် intrachain disulfide တံတားများပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ~7 KDA, (တစ် 14-အမိုင်နိုအက်ဆစ် peptide ဖြစ်ပါသည်သဖန်းသီး။ 2) ။ orexin-တစ်ဦး၏အမိုင်နိုအက်ဆစ် sequence ကိုကောင်းစွာ (နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အကြားထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်Sakurai et al ။ , 1998; ဒိုင်ယာ et al ။ , 1999) ။ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေက orexin-B ကိုကို C-terminal ကိုကြားတွင်အတူ ~28 KDA တစ် 2.9-အမိုင်နိုအက်ဆစ် peptide ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းစွာနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အကြားထိန်းသိမ်းထားနှင့် orexin-တစ်ဦးက (အတူကို C terminus ၏အမိုင်နိုအက်ဆစ် sequence ကိုအတွက်သိသိသာသာဝိသေသလက္ခဏာပြသနေသည်သဖန်းသီး။ 2) ။ Orexin-တစ်ဦးကပိုပြီးတည်ငြိမ် orexin-B က (ထက်Kastin နှင့် Akerstrom, 1999), အရာသည်၎င်း၏တစ်ရှူးနှင့်သွေးပြင်းအား orexin-B ကိုများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားများမှာအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြသည်။ ထိုမှတပါး, orexin-တစ်ဦးက orexin-B က, သွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီး permeant (နှငျ့မတူဘဲအတွက်ကြောင့်စေသည်ရာ orexin-B ကထက်ပိုမိုမြင့်မား liposolubility ပြသKastin နှင့် Akerstrom, 1999).
ခ Orexin receptor နှင့်သူတို့၏ signal ယန္တရားများ
OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး (အသီးသီးခရိုမိုဆုမ်း 1 နှင့်6ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနှစ်ခုဗီဇအားဖြင့် encoded နေကြသည်ခုနစ် transmembrane ဒိုမိန်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors များမှာSakurai et al ။ , 1998) ။ လူ့ OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး, အသီးသီးရှည်လျား 425 နှင့် 444 အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေဟာတစ်ဦး 64% အမိုင်နိုအက်ဆစ် sequence ကိုဝိသေသလက္ခဏာအပိုင်များနှင့်မြင့်မား OX94-ရူပီးနှင့် OX95- များအတွက်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ် (1% နှင့် 2% အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဝိသေသလက္ခဏာအကြားထိန်းသိမ်းထားကြသည် လူသားများနှင့်ကြွက်) အကြားရူပီး။ အဆိုပါ OX1-R ကိုနှစ်ဦးစလုံး orexins များအတွက် nonselective ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းအဆိုပါ OX2-R, orexin-တစ်ဦးအဘို့အရွေးချယ်ဖြစ်ပါသည်: ဆှဖှေဲ့ (EC50) OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီးများအတွက် orexin-တစ်ဦး၏ 30 နှင့် 34 nm ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, orexin-B ကသူတို့ (အသီးသီး 2500 နှင့် 60 nm များမှာde Lecea et al ။ , 1998; Sakurai et al ။ , 1998).
stably OX1-ရူပီးနှင့် / သို့မဟုတ် OX2-ရူပီးဖော်ပြတရုတ်ဟမ်းစတား Ovary (cho) ဆဲလ်အညီရရှိသောသက်သေအထောက်အထားများ၏အမြောက်အများ, နှစ်ဦးစလုံး receptors ၏ activation intracellular Ca တိုးပွါးကြောင်းဖော်ပြသည်2+ အာရုံစူးစိုက်မှု ([Ca2+]i()စမတ် et al ။ , 1999; ကိန်း et al ။ , 2000; Lund et al ။ , 2000; Holmqvist et al ။ , 2001; Ammoun et al ။ , 2003; Larsson et al ။ , 2005) ။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုအလှည့်အတွက် inositol triphosphate မှ phosphatidylinositol ၏ပျက်ပြား catalyzes ရာ phospholipase ကို C (PLC) ၏ activation, (IP မှ ensues3) နှင့် diacylglycerol ။ Diacylglycerol (PK) ကို C နှင့် IP ပရိုတိန်း kinase မြှင့်လုပ်ဆောင်3 Ca ပိုကောင်းစေပါတယ်2+ အလှည့်အတွက် PKC မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်း intracellular စတိုးဆိုင်ကနေဖြန့်ချိ။ PKC နှင့်တိုးမြှင့် [Ca2+]i ပွင့်လင်း Ca ဗို့-န့်သတ်ထားထားပြီး2+ ထိုသို့သောအားဖြင့် Ca လှုံ့ဆော်လိုင်းများ,2+ ဆဲလ်အမြှေးပါး depolarization ရောက်လာခြင်းနှင့် inducing (သဖန်းသီး။ 3) ။ OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီးဤသက်ရောက်မှု excitatory, G ပရိုတိန်း Gq / 11 သူတို့ရဲ့နားချင်းဆက်မှီနေဖြင့်ရရှိခဲ့ကြသည်။ တွေ့ရှိချက် OX2-ရူပီး inhibitory, G ပရိုတင်း, G ဖို့နားဆက်မှီရာတွင်ကြောင်းညွှန်ပြi/Go ဒါ့အပြင်ငွေကျပ်ဖြစ်ပေါ်စေ+ အာရုံခံနှင့်ဆဲလ်အမြှေးပါး hyperpolarization အတွက် efflux (သဖန်းသီး။ 3()ဝီလီ et al ။ , 2001; Beuckmann နှင့် Yanagisawa, 2002) ။ ဒါဟာ (အပိုင်း IV.B.1 ။ နှင့် VB2 ကြည့်ရှုပါ။ ) လမ်းကြောင်းအချက်ပြ / သက်သေအထောက်အထား OX2-ရူပီးကိုလည်း adenylate cyclase (AC) မှ coupled ဖြစ်ကြောင်းလူ့ခြင်းနှင့်ကြွက် adrenocortical ဆဲလ်ထဲမှာရှိကွောငျးဖျောပွထားသညျ့ခံရဖို့လည်း PKA ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် PKA များအတွက် putative phosphorylation က်ဘ်ဆိုက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင် OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အစီရင်ခံထားသည်Kreegipuu et al ။ , 1999; Kukkonen et al ။ , 2002), နှင့် OX1-ရူပီးတစ်ဦးအနိမ့်အာနိသင် GS နားချင်းဆက်မှီနှင့်မြင့်မားသောအာနိသင် PLC / PKC နားချင်းဆက်မှီမှတဆင့် cho ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ AC အလှုံ့ဆော်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည် (Holmqvist et al ။ , 2005).
လူ့ orexin-A နှင့် orexin-B က၏အမိုင်နိုအက်ဆစ် sequence ကို။ Orexin-တစ်ဦးက6နှင့် 12 အတွက် cysteine ​​အကြွင်းအကျန်များနှင့်7နှင့် 14 ရာထူးအကြားတစ်ဦး N-terminal ကို pyroglutamyl ကျန်ကြွင်းနှစ်ယောက် intramolecular disulfide တံတားများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အဆိုပါ orexin-တစ်ဦးကအမိုင်နိုအက်ဆစ် sequence ကိုလူသားမြားသညျ, သိုး, ဝက်, ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်တူညီသည်။ လူ့ orexin-B ကဝက်, ကြွက်များနှင့်2နှင့် 18 ရာထူးနှစ်ခုအမိုင်နိုအက်ဆစ်အစားထိုး (မြှား) အတွက်ကြွက်၏ထံမှကွဲပြားနေသည်။ orexin-A နှင့် orexin-B ကအကြားတူညီအမိုင်နိုအက်ဆစ်ယောင်နေကြသည်။
III ကို။ Orexins နှင့် Hypothalamic-Pituitary-Adrenal ဝင်ရိုးတန်း၏ဗဟိုဌာနခွဲအတွက်သူတို့ရဲ့ receptor ၏ expression များနှင့်ရာထူးအမည်
Orexins နှင့်သူတို့၏ receptor ၏အေ Expression
1 ။ Hypothalamus ။
Orexins နှင့်၎င်းတို့၏ receptors မူလကြွက်နှင့်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်း hypothalamus တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအတွက်စစ-orexin နှင့် orexin အဲဒီ receptor mRNA ၏ထောက်လှမ်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ကြီးမားသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြီးသားကျယ်ကျယ် (အပိုင်းဗြဲကိုကြည့်ပါ) ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သဤနေရာတွင် orexin-အပြုသဘောအာရုံခံခြင်းနှင့် OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး၏ hypothalamic ဖြန့်ဝေအပေါ်လေ့လာမှုများလေ့လာမှဆွေးနွေးမှုကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး။ Orexin စကားရပ်။
situ Hybrid ခုနှစ်တွင်စစ-orexin mRNA ဖော်ပြအာရုံခံနှစ်ခုလုံးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ (လိုပက်ဇ် et al များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာထဲမှာအဓိကအားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ , 2000, 2001; Stricker-Krongrad နှင့် Beck, 2002) နှင့်စကားရပ်အသက် 15 နှင့် 20 ရက်ပေါင်းအကြားတိုးပွားလာသောမွေးကင်းစကြွက်, (Yamamoto et al ။ , 2000) ။ Immunocytochemistry (ICC က) ကို perifornical နျူကလိယနှင့် posterior hypothalamic ဧရိယာမှ extension တွေနဲ့အတူအထူးသဖြင့်ပျမ်းမျှထူးမြတ်သောများ၏အဆင့်မှာ, ကြွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ၌ orexin-အပြုသဘောအာရုံခံ၏အဓိကမူပြောင်းခြင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအအာရုံခံအမျှင်စီမံကိန်းအတွက်ကနေကျယ်ပြန့်ဦးနှောက် (cortex, olfactory မီးသီး, thalamus, နှင့် brainstem) နှင့် arcuate နျူကလိယ, supraoptic နျူကလိယနှင့် paraventricular နျူကလိယ (PVN) အပါအဝင်အခြား hypothalamic အရေးပါ, (ရန်ဗန်တွင်း Pol et al ။ , 1998; ချန် et al ။ , 1999; Cutler et al ။ , 1999; နေ့စွဲ et al ။ , 1999; Nambu et al ။ , 1999; Funahashi et al ။ , 2000; Cai et al ။ , 2001; Kanenishi et al ။ , 2004) ။ orexin-A- နှင့်တစ်ခုလုံးကို hypothalamus တစ်လျှောက်လုံး orexinergic အမျှင်နှင့်အတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ၌ orexin-B-အပြုသဘောအာရုံခံ၏ရှေ့မှောက်တွင်လည်းဆီးရီးယား, ဆိုက်ဘေးရီးယားနှင့် Djungarian ဟမ်းစတား (ထဲမှာ ICC ကအားဖြင့်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးMcGranaghan နှင့် Piggins, 2001; Khorooshi နှင့် Klingenspor, 2005) ။ Fasting- နှင့်အင်ဆူလင်ကုထုံးတွေ hypoglycemia တိုးမြှင့စစ-orexin mRNA စကားရပ်နှင့် orexin-A နှင့် orexin-B ကပြင်းအားကြွက် hypothalamus အတွက် (လိုပက်ဇ် et al ။ , 2000; Cai et al ။ , 2001; Karteris et al ။ , 2005), နှင့်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းစေတယ်လေရာ leptin ၏ icv အုပ်ချုပ်ရေး, အစာရှောင်ခြင်း၏သက်ရောက်မှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, leptin ၏ ip ဆေးထိုး (မွေးကင်းစကြွက်များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ၌စစ-orexin mRNA တိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်Yamamoto et al ။ , 2000) ။ Adrenal-ectomy သွေးဆောင်နေတဲ့ကြွက် hypothalamus အတွက်စစ-orexin mRNA အတွက် 50% လျော့နည်းသွားနှင့် dexamethasone အုပ်ချုပ်ရေး (ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဖျက်သိမ်းStricker-Krongrad နှင့် Beck, 2002) ။ စစ-Orexin mRNA (ကြွက်များတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ပိုက်ကွန်မြင့်တက်ခံယူပြထားပြီးKanenishi et al ။ , 2004), နှင့် (orexin-A နှင့် orexin-B ကနှစ်ဦးစလုံး၏ပြင်းအား luteinizing ဟော်မုန်းအထောက်အကူပြုနိုင်သော proestrus အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် prolactin surgesPorkka-Heiskanen et al ။ , 2004) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုအသက်အရွယ်-related (3 ထံမှ 8 လ) orexin-B က orexin-တစ်ဦးအတွက်လျော့ပေမယ့်မပေး, ကြွက် hypothalamus အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု (သရုပ်ပြခဲ့ပြီးPorkka-Heiskanen et al ။ , 2004).
orexin-A နှင့် orexin-တစ်ဦးသို့မဟုတ် orexin-B မှ activation အပေါ်သို့ OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး၏အဓိကအချက်ပြလမ်းကြောင်း၏သိထားပုံဆွဲအသီးသီး။ , G, G ပရိုတိန်း; : P, phosphorylation site ကို; PIP2, phosphatidylinositol biphosphate ။ အခွားသောအတိုကောက်စာသားထဲမှာညွှန်ပြနေကြသည်။ ခရေပွင့ OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး၏ orexin-အသိအမှတ်ပြုဆိုဒ်များ mark ။
ခ။ Orexin အဲဒီ receptor စကားရပ်။
situ Hybrid နှင့် ICC ကအတွက်ကြွက် OX1-R စကားရပ်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့် (ထို ventromedial နှင့် dorsomedial အရေးပါနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာမှ OX2-R စကားရပ်, PVN နှင့် arcuate, mammillary နှင့် tuberomammillary အရေးပါဖို့ကန့်သတ်ခံခဲ့ရကွောငျးဖျောပွခဲ့Trivedi et al ။ , 1998; lu et al ။ , 2000; Marcus et al ။ , 2001) ။ Cluderay et al ။ (2002) ကို OX2-ရူပီး၏ဖြန့်ဖြူးအတည်ပြုခဲ့သည်ပေမယ် OX1-R ကို mRNA ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး detect နိုင်ခြင်းရှိကြ၏။ ဆနျ့ကငျြ, Hervieu et al ။ (2001) OX2-R စကားရပ်ကိုရှာဖွေပေမယ့် OX1-R ကိုဖော်ပြအထက်ဖော်ပြပါအရေးပါအတွက် OX2-R ကို mRNA ၏ရှေ့မှောက်တွင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိပေ။ ယေဘုယျအားဤကွဲလွဲတွေ့ရှိချက်အသုံးပြုသောစုံစမ်းစစ်ဆေးများ၏တိကျသောအကြောင်းကိုသံသယကိုသွန်းလေ၏။ situ Hybrid အတွက်အထီးသိုး orexin receptors ၏ hypothalamic ဖြန့်ဖြူးအောက်ပါခြွင်းချက်နှင့်တကွ, ကြွက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းထင်ဟပ်ကြောင်းသရုပ်ပြ: OX1-R ကို mRNA ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ, arcuate နျူကလိယနှင့် PVN နှင့် OX1-R ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ကြီး OX2-R ကိုပုပျမ်းမျှထူးမြတ်သောအတွက် mRNA (Zhang က et al ။ , 2005) ။ အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်း (AC- နှင့် PLC-မှီခိုကက်စကိတ်သူတို့ရဲ့နားချင်းဆက်မှီတိုးမြှင့်ဖို့ကြွက် hypothalamus တက်-ထိန်းညှိဖို့ OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအစီရင်ခံအဖြစ်ထားပြီးKarteris et al ။ , 2005).
2 ။ Pituitary gland ။
orexins ၏အဘယ်သူမျှမစကားရပ်, mRNA နှင့်ပရိုတိန်းအဖြစ်, (လူ့ pituitary gland ၌တွေ့Arihara et al ။ , 2000) ။ အလားတူပဲဒီသည်အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်များ၏ဂလင်းအတွက်ပေါ်ပေါက်စေမည်အကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
ပြောင်းပြန်ကူးယူ (RT ကို) ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု (PCR) -polymerase နှင့် ICC က OX1-ရူပီးနှင့်ကြွက်များ၏ pituitary gland အတွက် OX2-ရူပီး (နှစ်ဦးစလုံး၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုသရုပ်ပြနေ့စွဲ et al ။ , 2000; Jöhren et al ။ , 2001, 2003), သိုး (Zhang က et al ။ , 2005), နှင့်လူသား (Blanco et al ။ , 2001) ။ Blanco et al အရသိရသည်။ (2001), အ OX1-R က GH နှင့်အတူ coexpressed ခဲ့သည်ဘယ်မှာ acidophils အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ကြီးနှင့်ပိုဒျအတွက် OX2-R ကို intermedia နှင့် basophils ကြောင့် ACTH နှင့်အတူ coexpressed ရာ။ ကြွက် pituitary ခုနှစ်, OX1-R စကားရပ် (OX2-R ၏ကျော်နိုင်ကြနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ထက်ယောက်ျားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့Jöhren et al ။ , 2001) ။ Gonadectomy (အသီးသီးအကျိုးသက်ရောက်မှု1β-estradiol နှင့် testosterone ဟော်မုန်း၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ဖျက်သိမ်းခံရ, အမျိုးသမီးနှင့်အထီးကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် OX17-R စကားရပ်တိုးလာJöhren et al ။ , 2003).
adrenocorticotropin-releasing ဟော်မုန်း (CRH) နှင့်မိုင်နိုအက်စစ်-vasopressin (AVP) ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါ hypothalamic အရေးပါ orexin-အပြုသဘောအာရုံခံဆံ့နှင့် orexin receptors နှင့်အတူပေးအပ်ကြသည် (အပိုင်း III.A.1 ကြည့်ရှုပါ။ ), နှင့် pituitary gland orexin receptors ပိုင်ဆိုင် (အပိုင်း III.A.2 ကြည့်ပါ။ ) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ orexin system ကိုအနည်းဆုံးကြွက်ထဲမှာ, AVP, CRH များ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ACTH လွှတ်ပေးရန်အတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းညွှန်ပြတွေ့ရှိချက်လေ့လာပါလိမ့်မယ်။
Orexin-A နှင့် orexin-B က c- မြှင့်တင်ရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်fos mRNA စကားရပ် (Kuru et al ။ , 2000), နှင့် orexin-တစ်ဦးကို (PVN အတွက် CRH နှင့် AVP mRNA အဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်အစီရင်ခံထားသည်al-Barazanji et al ။ , 2001; Brunton နှင့်စယ်, 2003) ။ Orexin-တစ်ဦးက hypothalamic explants (ထံမှ CRH လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွပေးစယ် et al ။ , 2001), နှင့် hypothalamic ချပ်ရန်၎င်း၏လျှောက်လွှာ depolarization နှင့် PVN အာရုံခံ၏ဆူးကြိမ်နှုန်းတစ်ခုတိုး (များတွင်ရလဒ်ရှံဆုန် et al ။ , 2002) ။ ယုန်အတွက် orexin-တစ်ဦးကတိုးမြှင့်ပလာစမာ AVP အာရုံစူးစိုက်မှု၏ထို့အပြင် icv အုပ်ချုပ်ရေး (Matsumura et al ။ , 2001) ။ orexin-တစ်ဦး၏ CRH-လှုံ့ဆော်အရေးယူ orexin-တစ်ဦးက CRH သာတိုးလာပေမယ့်လည်း hypothalamic explants နှင့် CRH လွှတ်ပေးရေးအပေါ်လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုကနေ NPY လွှတ်ပေးရန်ပိတ်ဆို့ကြောင့်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်, Y1 အဲဒီ receptor မျိုးကွဲမှတဆင့် NPY ကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပုံပေါ် တစ်ဦး Y1 အဲဒီ receptor ရန် (ခွငျးအားဖွငျ့စယ် et al ။ , 2001) ။ ထို့ကြောင့် corticosterone ၏အသွေးအဆင့်အတွက် orexin-သွေးဆောင်တစ်ဟုန်ထိုး (အပိုင်း IV.B.2 ကြည့်ပါ။ ) (တစ် NPY ရန်သို့မဟုတ် NPY antiserum နှင့်အတူ pretreatment ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်Jaszberényi et al ။ , 2001) ။ သို့သျောလညျးကိုပိုမိုမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များ (ကြွက်များတွင် HPA ဝင်ရိုး၏ orexin-သွေးဆောင်ဆွအတွက် NPY များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအတည်ပြုမပေးခဲ့ပါဘူးMoreno et al ။ , 2005) ။ မွေးကင်းစကလေးများ monosodium ဌ-အချိုမှုကုသမှု glucocorticoid တုံ့ပြန်မှုမနှမြောဘဲ orexin-တစ်ဦးက icv စားနပ်ရိက္ခာ-စားသုံးမှုတုံ့ပြန်မှုအယှက်မှရှာတွေ့ခဲ့သည်တကယ်တော့ထို arcuate နျူကလိယ၏ပျက်စီးခြင်းအများနှင့် hypothalamic NPY-ergic လှုပ်ရှားမှုသည်။
သူတို့ရဲ့ icv အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် ACTH အသွေးသည်အဆင့်အတွက်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်း Orexins (အပိုင်း IV.B.2 ကြည့်ရှုပါ။ ), ACTH ၏ pituitary လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသွယ်ဝိုက် CRH ၏ hypothalamic ထုတ်လုပ်မှု၏ဆွကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာသည်နှင့် AVP အဓိကဇီဝကမ္မ ACTH secretagogues (အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ် Engelmann et al ။ , 2004) ။ တကယ်တော့, orexins မယဉ်ကြွက် pituitary ဆဲလ် (ထံမှထိခိုက်နစ်နာ Basal ACTH လွှတ်ပေးရန်ရှံဆုန်နှင့်တေလာ, 2001) မ pituitary gland အတွက်လိုလားတဲ့ opiomelanocortin mRNA စကားရပ်ထမြောက်တော်မူ (al-Barazanji et al ။ , 2001) ။ သို့သော် orexin-A နှင့် orexin-B ကအနည်းငယ်မျှသာနှင့်အကျယ်ချဲ့ထိရောက်သောပြင်းအား 10 ဖြစ်ခြင်း, ယဉ်ကျေးမှု pituitary ဆဲလ်များက submaximally CRH-နှိုးဆွ ACTH လွှတ်ပေးရန်ကာကွယ်တားဆီးဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်-10 နှင့် 10-7 အသီးသီး M က, (ရှံဆုန်နှင့်တေလာ, 2001) ။ Orexin-တစ်ဦးက (10-7 M က) ', 3' 'monophosphate (Camp) ထုတ်လုပ်မှုနှင့် CRH-သွေးဆောင် ACTH လွှတ်ပေးရေးကို C calphostin အဆိုပါ PKC inhibitor အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ခံခဲ့ရသည်အပေါ် inhibitory အရေးယူပေမယ့်မပေး pertuxis အဆိပ်အတောက် Basal သို့မဟုတ် CRH-နှိုးဆွသိသိ adenosine5ဖြစ်စေမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ရှံဆုန်နှင့်တေလာ (2001) orexins ၏ဤအကျိုးသက်ရောက်သည့် PKC-မှီခိုအဆငျ့ဆငျ့မှ coupled OX1-ရူပီးကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက် orexins ဖို့အလှနျမွငျ့မား CRH-mediated ACTH တုံ့ပြန်မှုနျအအေးရည်ရွယ်ဒေသခံတစ်ဦး counterregulatory ယန္တရား၏တည်ရှိမှု၏ညွှန်ပြနေကြသည်ရှိမရှိစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကြွက်များတွင်ရရှိသောခဲ့ကြပေမယ့်သွယ်ဝိုက်အထောက်အထား endogenous orexin စနစ်ကအစလူမှာ HPA ဝင်ရိုး၏အလယ်ပိုင်းစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တကယ်တော့, narcoleptic (orexin-လစ်လပ်) လူနာ (တုံး ACTH နဲ့ Cortisol လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြသkok et al ။ , 2002).
IV ။ Orexins နှင့် Hypothalamic-Pituitary-Adrenal ဝင်ရိုးတန်း၏ Peripheral ဌာနခွဲအတွက်သူတို့ရဲ့ receptor ၏ expression များနှင့်ရာထူးအမည်
1 ။ Orexin Expression ။
အနိမ့်စစ-orexin mRNA စကားရပ် (လူ့ adrenal ဂလင်းအတွက် RT ကို-PCR အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးNakabayashi et al ။ , 2003) နှင့်စစ-orexin နှင့် orexin-တစ်ဦးကပရိုတိန်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်သန္ဓေသား (2nd သုံးလပတ်) လူ့ဂလင်း (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးKarteris et al ။ , 2001; Randeva et al ။ , 2001), ဒါပေမယ့်ပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများကဤတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုဖို့ခဲ့ပါဘူး (Spinazzi et al ။ , 2005b) ။ orexin စကားရပ်ကြွက် adrenal ဂလင်း (လိုပက်ဇ် et al ၌တွေ့မရှိပါ။ , 1999, 2001; Karteris et al ။ , 2005) ။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက်များ (အပိုင်း VI ကိုကြည့်ပါ။ ) adrenal OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး၏ activation orexins ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကကမကထပြုခဲ့နိုင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
2 ။ Orexin receptor Expression
တစ်ဦး။ လူ့ adrenal gland ။
Blanco et al ။ (2002) adrenal cortex နဲ့ medulla သီးသန့်အသီးသီး OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီးနှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့ ICC ကသက်သေအထောက်အထားကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ပေါင်းစပ် RT ကို-PCR, situ Hybrid အတွက်ချောင်း, ICC ကများနှင့်အနောက်တိုင်းချေတွေ့ရှိချက်တသမတ်တည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်သန္ဓေသား adrenal cortex သီးသန့် OX2-R ကို (ထုတ်ဖော်ပြောကြောင်းပြသKarteris et al ။ , 2001; Randeva et al ။ , 2001) ။ Mazzocchi et al ။ (2001bzona glomerulosa (ZG) တွင် -zona reticularis (ZR) နှင့် adrenal medulla သာ OX1-R ကို mRNA) ZF (OX2-R ကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့် OX1-R ကို mRNAs zona fasciculata အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်:) မဟုတ်ဘဲကွဲပြားခြားနားသော RT ကို-PCR တွေ့ရှိချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများ (လောလောလတ်လတ်လူစုခွဲနှင့်ယဉ်ကျေးမှုလူ့ adrenocortical ဆဲလ်တွေအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအဲဒီ receptor Subtype ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုအတည်ပြုZiolkowska et al ။ , 2005), နှင့်ကို real-time PCR နှင့်အနောက်တိုင်းချေ (OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး၏စကားရပ်၏အဆင့်ဆင့်သိသိသာသာကွာခြားမပြုခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြSpinazzi et al ။ , 2005b).
ခ။ adrenal gland ကြွက်။
RT-PCR လိုပက်ဇ် et al (adrenal တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအတွက် OX1-R နှင့် OX2-R ကို mRNAs နှစ်ဦးစလုံး၏ထောက်လှမ်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ , 1999, 2001; Malendowicz et al ။ , 2001a) နှင့်လောလောလတ်လတ်လူစုခွဲ ZF / ZR ဆဲလ် (Spinazzi et al ။ , 2005c) ။ OX1-ရူပီး၏ဆနျ့ကငျြမရှိစကားရပ် (Nanmoku et al ။ , 2000OX1-ရူပီးနဲ့နှိုင်းယှဉ် OX2-ရူပီး၏) သို့မဟုတ်အလွန်နိမ့်စကားရပ်Jöhren et al (သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြ။ , 2001, 2003) ။ အကျိုးစီးပွား, situ Hybrid အတွက်ချောင်း (အ ZG နှင့် ZR အတွက် OX2-R ကို mRNA ပြသပေမယ့်မ ZF နှင့် adrenal medullaJöhren et al ။ , 2001) ။ OX2-R စကားရပ် (အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ခြင်းတစ်ခုထင်ရှားလိင် dimorphism ပြသJöhren et al ။ , 2001) ။ ထို့ကြောင့် ovariectomy (အသီးသီးသက်ရောက်မှု17β-estradiol နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးခြင်းဖြင့်မလွယ်ကူခံရ, ယောက်ျား၌လျော့နည်းသွားအမျိုးသမီးနှင့် orchiectomy အတွက်တိုးလာJöhren et al ။ , 2003) ။ အဆိုပါ hypothalamus နှငျ့မတူဘဲ (အပိုင်း III.A.1 ကြည့်ရှုပါ။ ), အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ OX1-R နှင့်ကြွက် adrenal cortex အတွက် OX2-R ကို mRNA စကားရပ်ကိုဆင်း-ထိန်းညှိအဖြစ်သိသိသာသာ, G ဖို့ orexin အဲဒီ receptor နားချင်းဆက်မှီလျှော့ချဖို့ရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်q,, Gs, နဲ့ Go နဲ့ G ဖို့နားချင်းဆက်မှီတိုးမြှင့်ဖို့i စခန်းနှင့် IP ၏လူအများကချို့ယွင်းနှင့်အတူ3 orexin-တစ်ဦးမှတုံ့ပြန်မှု (Karteris et al ။ , 2005) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ hypothalamic, ဒါပေမယ့်မရ adrenal orexin receptors ကြွက်များတွင် glucocorticoid အသွေးတော်အဆင့်ဆင့်အတွက်အစာရှောင်ခြင်း-သွေးဆောင်တစ်ဟုန်ထိုး (ဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါအကြံပြုDallman et al ။ , 1999).
က c ။ သိုးများနှင့်ဝက် adrenal gland ။
အဆိုပါသိုး adrenal cortex သာ OX1-R ကို mRNA ဆံ့ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် (Zhang က et al ။ , 2005) ။ OX1-ရူပီး၏သီးသန့်စကားရပ်ကိုလည်း (ထိုစကားရပ်အဆုံးစွန်အတွက်ထက်ဟောင်းအတွက်အလွန်အားပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ခြင်း, ယဉ်ကျေးမှုဝက် adrenocortical နှင့် adrenomedullary ဆဲလ်အစီရင်ခံထားသည်Nanmoku et al ။ , 2002).
1 ။ Aldosterone Secret ။
(အပိုင်း IV.A.2 ကြည့်ရှုပါ။ ) က ZG အတွက်သရုပ်ပြခံတော်မူပြီးမှ receptors orexin နေသော်လည်းသက်သေအထောက်အထားများ၏အမြောက်အများ orexins ကွဲပြားသောကြွက်နှင့်လူ့ ZG ဆဲလ် (ထံမှ aldosterone လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမထိခိုက်ပါဘူးကွောငျးဖျောပွသMalendowicz et al ။ , 1999a; Mazzocchi et al ။ , 2001b) ။ သို့သျောလညျး, ယဉ်ကျေးမှုဝက် adrenocortical ဆဲလ် (ZG နှင့် ZF / ZR ဆဲလ်၏အမှန်တကယ်အရောအနှော) 60 တစ်ခုသာရှိပြီး aldosterone တုံ့ပြန်မှု (10% တိုး) ပြသ-7/ 10-6 M က orexin-တစ်ဦးက (Nanmoku et al ။ , 2002), ဒါပေမဲ့ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုဆဲလ်၏ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုလုံးဝလောလောလတ်လတ်လူစုခွဲဆဲလ်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မပြုစေခြင်းငှါပြန်ပြောပြရမည်ဖြစ်သည်။
ဆနျ့ကငျြ, orexin အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင် aldosterone ပလာစမာအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွါးကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ orexins ၏ acute SC ဆေးထိုး (10 nmol / ကီလိုဂရမ်) (aldosterone ပျံ့နှံ့နေတဲ့၏အဆငျ့မိ 60 မှ 120 အတွင်းကြီးပြင်းMalendowicz et al ။ , 1999b; Nowak et al ။ , 2000) နှင့်နာတာရှည် orexin အုပ်ချုပ်ရေး (20 ၏နေ့စဉ် SC ထိုး nmol /7နေ့ရက်ကာလအဘို့ကီလိုဂရမ်) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70% ကတိုးလာ (Malendowicz et al ။ , 2001a) ။ ပဋိသန္ဓေ ယူ. , orexins များ၏အတွက် Vivo aldosterone secretagogue အကျိုးသက်ရောက်မှုသွယ်ဝိုက် pituitary ACTH လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ဒါပေမယ့်လည်းတိုက်ရိုက် ZG များ၏အတွင်းသို့လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်သာရာ CRH နှင့် AVP ၏ hypothalamic လွှတ်ပေးရေးအပေါ်သူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်အရေးယူမှု (အပိုင်း III.B. ကိုကြည့်ပါ), ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆဲလ် ( Nussdorfer, 1996) ။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာ orexins ၏ Vivo အုပ်ချုပ်ရေးပလာစမာ angiotensin II ကိုသို့မဟုတ် K သည်ပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါလည်းဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်ပါတယ်+ အဆင့်ဆင့်။
2 ။ Glucocorticoid Secret ။
ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား orexins တစ် 2-ခြံယန္တရားကနေတဆင့်, အတွင်းစိတ် adrenocortical အလွှာထဲကနေ glucocorticoid လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်: ACTH ၏ CRH / AVP-mediated လွှတ်ပေးရေး 1) ဆွ (အပိုင်း III.B. ကိုကြည့်ပါ); orexin receptors (အပိုင်း IV.A.2 ကြည့်ရှုပါ။ ) နဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့ ZF / ZR ဆဲလ်များ၏နှင့် 2) တိုက်ရိုက်ဆွ။
Vivo လေ့လာမှုများအတွက်သောကြွက်များတွင် orexin-တစ်ဦးက acute ကြီးပြင်း ACTH နှင့် corticosterone အသွေးတော်အဆင့်ဆင့်၏စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှု (ပြသMalendowicz et al ။ , 1999b; Nowak et al ။ , 2000) ။ Orexin-B က orexin-B ကသွေးထဲတွင်လျှင်မြန်စွာယုတျညံ့ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း orexin-တစ်ဦးကလျှင်မြန်စွာ (အပိုင်း II.A. ကိုကြည့်ပါ), ရိုးရှင်းပျံ့နှံ့အားဖြင့်သွေးကဦးနှောက်အတားအဆီးဖြတ်သန်းသွားသည်သောအယူအဆနှင့်အတူကောင်းစွာညီသောထိရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ သူတို့အုပ်ချုပ်နေကြသည်အခါ corticosterone တုံ့ပြန်မှုအနည်းငယ်နှောင့်နှေးလျက်ရှိအတူ Orexins ပိုပြီးထိရောက် icv Orexin-တစ်ဦးက (နှစ်ဦးစလုံး ACTH နှင့် corticosterone အသွေးတော်အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်နေကြတယ်Ida et al ။ , 2000; Jaszberényi et al ။ , 2000; Kuru et al ။ , 2000; al-Barazanji et al ။ , 2001; စယ် et al ။ , 2001; Brunton နှင့်စယ်, 2003) ။ Orexin-B ကJaszberényi et al (orexin-တစ်ဦးထက်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ , 2000, 2001; Kuru et al ။ , 2000), အားဖြင့် (အပိုင်း II.B. ကိုကြည့်ပါ) အကျိုးသက်ရောက်မှု OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီးနှစ်ဦးစလုံးကကမကထပြုခဲ့ခဲ့အကြံပြုခြင်း။ orexin-တစ်ဦးမှအဆိုပါ ACTH နှင့် corticosterone တုံ့ပြန်မှု (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့ကြသည်Brunton နှင့်စယ်, 2003), တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်အတွင်းစစ-orexin ၏အစီရင်ခံတိုးမြှင်စကားရပ်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ပုံမရရှာတွေ့ (အပိုင်း III.A.1 ကြည့်ပါ။ ) ။ orexins များ၏အတွက် Vivo glucocorticoid secretagogue အရေးယူသွယ်ဝိုက်သူတို့ရဲ့ hypothalamic သက်ရောက်မှုကကမကထပြုခဲ့သောရန်တွေ့ခြင်းအတွက် CRH ရန်α-helical CRH (9-41) နဲ့ pretreatment ACTH နှင့် corticosterone ပလာစမာထဲမှာ orexin-A-evoked အပွောငျးအလဲပိတ်ဆို့သောဆန္ဒပြပွဲအားဖြင့်အတည်ပြု ကြွက်များတွင်ပြင်းအား (Ida et al ။ , 2000; ရှံဆုန် et al ။ , 2002).
သက်သေအထောက်အထားများ၏အမြောက်အများ (အပိုင်း IV.A.1 ကြည့်ရှုပါ။ ) orexins glucocorticoid လျှို့ဝှက်ချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအချို့အုပ်စုများကဖော်ပြထား adrenal ဂလင်းအတွက် OX2-ရူပီး၏ပျံ့နှံ့နေသော်လည်း ZF / ZR ဆဲလ်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး OX2-ရူပီးကနေတစ်ဆင့်သရုပ်ဆောင်တိုးမြှင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အစောပိုင်းလေ့လာမှုများ (နှစ်ဦးစလုံး orexins corticosterone ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေမယ့်Malendowicz et al ။ , 1999a), နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတသမတ်တည်းကွဲပြားဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုကြွက်နှင့်လူ့ ZF / ZR ဆဲလ် (ထံမှသာ orexin-တစ်ဦးကအာရုံစူးစိုက်မှုရသည်တိုးလာ Basal corticosterone သို့မဟုတ် cortisol လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြသMazzocchi et al ။ , 2001b; Spinazzi et al ။ , 2005b) ။ အနည်းဆုံးနှင့်အကျယ်ချဲ့ထိရောက်သောပြင်းအားခဲ့ကြသည် 10-8 နှင့် 10-7/ 10-6 ကြွက်များနှင့် 10 က M-10 နှင့် 10-8 လူသားများတွင် M က။ သီးသန့် OX2-ရူပီးချည်နှောင်ထားတဲ့ orexin-B က၏ထိရောက်မှုမရှိ, (အပိုင်း II.B. ကိုကြည့်ပါ), orexins ၏တိုက်ရိုက် glucocorticoid secretagogue အရေးယူ၌ဤအဲဒီ receptor မျိုးကွဲများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုထွက်နေပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ OX1-ရူပီး၏ immunoneutralization ထိရောက်မှုခဲ့သော်လည်းဤသည်ရန်တွေ့ခြင်းတိုက်ရိုက် (တိကျတဲ့ပဋိအားဖြင့် OX2-ရူပီးများ၏ပိတ်ဆို့ orexin-တစ်ဦးကမှယဉ်ကြွက်နှင့်လူ့ ZF / ZR ဆဲလ်တွေနှစ်ဦးစလုံး၏အတွင်းသို့တုံ့ပြန်မှုဖျက်သိမ်းသောဆန္ဒပြပွဲအားဖြင့်ထောက်ခံထားပြီးZiolkowska et al ။ , 2005).
Orexin-တစ်ဦးကလုပျသငျလူစုခွဲ ZF / ZR ဆဲလ်ကနေ ACTH-နှိုးဆွ glucocorticoid လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိခိုက်စေပေမယ့် angiotensin II နှင့် endothelin-1 (၏ထိရောက်သောပြင်းအား maximal ဖို့ glucocorticoid တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်မပေးခဲ့ပါဘူးMalendowicz et al ။ , 1999a; Mazzocchi et al ။ , 2001b), အရာ agonists အဓိကအားအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် (PLC / PKA အဆငျ့ဆငျ့ကိုသက်ဝင်ကြသည် Nussdorfer et al ။ , 1999) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်, ဆိုလိုသည်မှာ, orexin-A နှင့် ACTH ရှယ်ယာသော AC-မှီခိုအဆငျ့ဆငျ့၏ activation ဘုံအချက်ပြယန္တရားအကြံပြုထားသည်။ ဤသည်ရန်တွေ့ခြင်းဆန္ဒပြပွဲကြောင့် 1) orexin-တစ်ဦးကတိုးမြှင့်စခန်းရှိသော်လည်းအိုင်ပီကထောက်ခံခဲ့သည်3 ZF / ZR ဆဲလ်တွေ (နေဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုMalendowicz et al ။ , 1999a; Mazzocchi et al ။ , 2001b) နှင့် 2) orexin-တစ်ဦး၏ glucocorticoid secretagogue အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ AC အ inhibitors စတုရန်းမိုင်-22536 ဒါမှမဟုတ် PKA inhibitor H89 ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ဖျက်သိမ်းနှင့် PLC နှင့် PKC အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ် U-73122 နှင့် calphostin-C ကို (inhibitorsSpinazzi et al ။ , 2005b) ။ Randeva et al ။ (2001) 10 မှ orexin-တစ်ဦးက (သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်-11 10 မှ-7 M က) စခန်း, ဒါပေမယ့်လည်းအိုင်ပီသာတိုးလာ3 လူ့ adrenal အမြှေးပါးကနေထုတ်လုပ်မှု, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပဋိသန္ဓေ ယူ. cortex နဲ့ medulla နှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်ဆိုလိုသည်မှာတစ်ခုလုံးကို adrenal gland ကနေရယူကြသည်ဟုမှတ်ချက်ချရမည်ဖြစ်သည်။
3 ။ Adrenocortical ဆဲလ်ကြီးထွားမှု။
orexins မဆိုအတွင်းသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုမှ coupled မဟုတ် adrenocortical ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ OX2-ရူပီး၏ရှေ့မှောက်တွင်သူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေ receptors များမှာသို့မဟုတ်ဤ peptides တစ်တိုးတက်မှုနှုန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေတစ်ခုခုသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုလိမ့်မည်။ အဆုံးစွန်သောအောက်ပါတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပေါ်လာသည်။
orexins များ၏စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနုကြွက် adrenal cortex အတွက်ပြန့်ပွားအညွှန်းကိန်းတိုးမြှင့်ဖို့နှင့်နေ့5မှာမဟုတ်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး၏နေ့ 8 မှာ enucleated ဂလင်းထဲမှာကိုလျှော့ချရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည် (Malendowicz et al ။ , 2001b) ။ Orexin-တစ်ဦးက (24-ဇထိတွေ့မှု) ယဉ်ကျေးမှုကြွက် adrenocortical ဆဲလ်များ၏ပြန့်ပွားမှုနှုန်းတိုးလာပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြောင်းပြန် 10 မှာ peptide အာရုံစူးစိုက်မှု (အများဆုံးဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်-10 M ကများနှင့် 10 မှာနိမ့်ဆုံး-6 M က) ။ ဆနျ့ကငျြ, orexin-B က (10-8 သို့မဟုတ် 10-6 M က) တွင်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းလျော့သွားသည်။ OX1-R ကို immunoblockade ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာသေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သိသိသာသာလျော့နည်းသွားစေ orexin-တစ်ဦး၏ proliferogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ OX2-R ကို immunoneutralization (orexin-တစ်ဦး၏ proliferogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် orexin-B က၏ antiproliferogenic အရေးယူဖျက်သိမ်းSpinazzi et al ။ , 2005c) ။ (OX2-R ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်) orexin-တစ်ဦး၏ proliferogenic အကျိုးသက်ရောက်မှု mitogen-activated ပရိုတိန်း kinase (MAPK) p42 / p44 inhibitor PD98059 ဖွငျ့ဿဟာယပျက်ခဲ့ပါတယ်နှင့် orexin-B က၏ antiproliferogenic လုပ်ဆောင်ချက်ကို MAPK p38 inhibitor အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရ SB203580 (Spinazzi et al ။ , 2005c) ။ ထို့ကွောငျ့ OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီးအသီးသီး, အ MAPK p42 / p44 နှင့် p38 ကက်စကိတ်၏ activation မှတဆင့်ကြွက် adrenocortical ဆဲလ်အပေါ် orexins ၏ proliferogenic နှင့် antiproliferogenic လုပ်ရပ်များဖျန်ဖြေကြောင်း။ ကောက်ချက်ချခဲ့သည်
ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကို 10 ရသောနှစ်ဦးစလုံး orexins ယဉ်လူ့ adrenocortical ဆဲလ်, (အတွင်းရရှိသောခဲ့ကြသည်-8 မီတာ) တိုးမြှင့်တီထွင်ခဲ့တယ်လှုပ်ရှားမှု (Spinazzi et al ။ , 2005b) ။ orexin-B က orexin-တစ်ဦးထက် ပို. ထိရောက်သောခဲ့သောကြောင့်, က OX2-ရူပီး orexins ၏တိုးတက်မှု-မြှင့်တင်အရေးယူမှုဖျန်ဖြေကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်း orexins တစ်ခု OX1-R-mediated antigrowth (proapoptotic) အကျိုးသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌လူ့အူမကြီး cancer- နှင့် neuroblastoma-ဆင်းသက်လာဆဲလ်လိုင်းများထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် cho အတွက်ကြွက်နှင့်လူသားအကြားကဤကှာဟဖြေရှင်းဖို့ထွက်သယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည် OX1-R-transfected ဆဲလ် (Rouet-Benzineb et al ။ , 2004).
4 ။ catecholamines Secret ။
အမျိုးမျိုးသောနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်တည်ရှိ၏ adrenal-medulla Secret အပေါ် orexins ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်တွေ့ရှိချက်များနှိုငျးယှဉျ။ ကြွက် pheochromocytoma-ဆင်းသက်လာ PC12 ဆဲလ်လိုင်း Nanmoku et al အသုံးပြုခြင်း။ (2000) 10 (orexin-A နှင့်နှစ်ဦးစလုံး orexin-B ကကြောင်းပြသ-7 မီတာ) Basal သို့မဟုတ် pituitary adenylate cyclase-ကိုသက်ဝင် polypeptide-နှိုးဆွ tyrosine hydroxylase စကားရပ်, စခန်းလွှတ်ပေးရန်နှင့် dopamine လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုခုကိုလျော့နည်းသွားသည်။ PC12 ဆဲလ်တွေနှစ်ဦးစလုံး orexins တန်းတူစည်းနှောင်စွမ်းရည်ပြသသောကြောင့်ဤစုံစမ်းစစ်ဆေး orexins အဆိုးကတော့ AC-မှီခိုအဆငျ့ဆငျ့မှ coupled OX2-ရူပီးကနေတဆင့် catecholamines ပေါင်းစပ် inhibited ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
Orexin-တစ်ဦးက (10-10 မီတာ) သာ OX1-R ကို mRNA (ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းယဉ် bovine adrenomedullary ဆဲလ်တွေအတွက်) TH လှုပ်ရှားမှုနှင့် catecholamines ပေါင်းစပ် (မြှင့်တင်ရန်ပေမယ့်ဖြန့်ချိမရှာတွေ့ခဲ့သည်Kawada et al ။ , 2003) ။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ဖွယ် orexins အဆိုပါ PKC လမ်းကြောင်းမှ coupled OX1-ရူပီးကနေတဆင့် bovine adrenal medulla အတွက် catecholamines ပေါင်းစပ်လှုံ့ဆော်သောဖြစ်နိုင်ခြေအောင်, အ PKC inhibitor staurosporin ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။
Orexin-တစ်ဦးက (10-6 မီတာ) အနိမ့် OX1-R စကားရပ်သိမ်းယူကြောင်းယဉ်ဝက် adrenomedullary ဆဲလ် (ထံမှ epinephrine နှင့် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်တိုးလာNanmoku et al ။ , 2002) ။ Orexin-တစ်ဦးကလည်းအားဖြင့် orexins အဆိုးကတော့ AC-မှီခိုအဆငျ့ဆငျ့မှ coupled OX1-ရူပီးကနေတဆင့်ဝက် adrenal medulla ကနေ catecholamines လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်းအကြံပြု, Basal နှင့် pituitary adenylate cyclase-ကိုသက်ဝင်နှစ်ဦးစလုံး polypeptide-နှိုးဆွစခန်းထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူ့ adrenal medulla ချပ်သူတို့ OX1-R နှင့် OX2-R ကို mRNAs (နှစ်ဦးစလုံးဖော်ပြဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း orexins မှမဆိုလေးမွတျအတွင်းသို့တုံ့ပြန်မှုပြခဲ့ပါဘူးMazzocchi et al ။ , 2001b) နှင့် orexins pheochromocytoma ချပ်ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာ catecholamines secretagogue အရေးယူကွိုးစားအားထု (အပိုင်း VC2 ကြည့်ရှုပါ။ ) ထို။
အဆိုပါ Hypothalamic-Pituitary-Adrenal ဝင်ရိုးတန်း၏ Pathophysiology အတွက် Orexins ၏ V. ပါဝင်ပတ်သက်မှု
သက်သေအထောက်အထား orexins ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးမှ HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု modulate စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ orexin-A နှင့် orexin-B က (10 nmol / ကီလိုဂရမ်) ကိုချီးမြှင့် ACTH နှင့်အအေးစိတ်ဖိစီးမှုမှ glucocorticoid တုံ့ပြန်မှုများ၏စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှု။ ပြောင်းပြန်အီစိတ်ဖိစီးမှုဖို့တုန့်ပြန် (သာ orexin-B ကအားဖြင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်Nowak et al ။ , 2000) ။ ရွေ့စိတ်ဖိစီးမှု (2 လအရွယ်) လူငယ်ကြွက်အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ၌စစ-orexin mRNA စကားရပ်တိုးမြှင့်နှင့်အအေးစိတ်ဖိစီးမှု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှု evokedIda et al ။ , 2000).
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (leptin ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေ antistress အကျိုးသက်ရောက်မှုများအလငျး၌ကြီးမြတ်အကျိုးစီးပွားတည်းဟူသော orexins prostress အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်Bornstein, 1997; Heiman et al ။ , 1997) ။ အဆိုပါ hypothalamic အဆင့်မှာ leptin နှင့် orexins အကြားအပြန်အလှန်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်း hypothalamic orexin-အပြုသဘောအာရုံခံ innervated leptin receptors နှင့်အတူပေးအပ် 1) အာရုံခံ (ဆန္ဒပြပွဲကထောက်ပံ့Funahashi et al ။ , 2000), 2) leptin receptors (အချို့ orexin-အပြုသဘောအာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်Horvath et al ။ , 1999), နှင့် 3) စနစ်တကျ leptin အုပ်ချုပ်ရေး (မွေးကင်းစကြွက် hypothalamus အတွက်စစ-orexin mRNA ပိုကောင်းစေပါတယ်Yamamoto et al ။ , 2000).
ခ Adrenocortical အကျိတ်
1 ။ Orexin နှင့် Orexin receptor Expression ။
အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများစစ-orexin mRNA နှင့် adrenocortical ကင်ဆာအတွက် orexin-တစ်ဦးက immunoreactivity (သတင်းပို့ဘူးArihara et al ။ , 2000), ဒါပေမယ့်ပိုပြီးမကြာသေးမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ (ဤမြင်းသရိုက်အနာ၏ 75% အတွက် 12 cortisol-secreting adenomas ၏% နှင့် orexin-တစ်ဦးက (4 ± 70 fmol / မီလီဂရမ်) ၏တိုင်းတာပြင်းအားပေမယ့်မပေး orexin-B ကအတွက်စစ-orexin mRNA တွေ့ရှိSpinazzi et al ။ , 2005b) ။ ICC က adrenocortical adenomas OX1-ရူပီးနှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့သရုပ်ပြပေမယ့်မပေး OX2-ရူပီး (Blanco et al ။ , 2002) ။ Real-time PCR နှင့်အနောက်တိုင်းချေအသုံးပြုခြင်း, Spinazzi et al ။ (2005b) အားလုံး cortisol-secreting adenomas စှဲ OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီးနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ mRNA ပုံမှန် adrenal cortex (114% နှင့် 63% ပိုမိုမြင့်မား) အတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာတက်-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းသာ။
2 ။ လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ကြီးထွားမှုအပေါ် Orexins ၏ဆိုးကျိုးများ။
လောလောလတ်လတ်လူစုခွဲ adenomatous ဆဲလ်တွေ, 10 ဖြစ်ခြင်းအနည်းဆုံးနှင့်အကျယ်ချဲ့ထိရောက်သောပြင်းအားကနေ Orexin-တစ်ဦးကအာရုံစူးစိုက်မှုရသည်တိုးလာ Basal cortisol ထုတ်လုပ်မှု-10 နှင့် 10-8 အသီးသီး M က။ Orexin-B က OX1-ရူပီး (များ၏သီးသန့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကိုက်ညီသောထိရောက်မှုခဲ့သည်Spinazzi et al ။ , 2005b) ။ OX1-ရူပီးထင်သည်အထင်မှား 10 ၏ cortisol secretagogue အကျိုးသက်ရောက်မှုဖျက်သိမ်း, AC အများနှင့် PKA ၏တိကျသော inhibitors သောကွောငျ့, မဟုတ် PLC နှင့် PKC ၏, ထို AC / PKA အဆငျ့ဆငျ့မှ coupled ခဲ့ကြသည်-8 M က orexin-တစ်ဦး။ Spinazzi et al ။ (2005b) ကိုလည်း 10 (နှစ်ဦးစလုံး orexins ကြောင်းသရုပ်ပြ-8 မီတာ) သိသိသာသာ (အပိုင်း IV.B.2 တွေ့မြင်ဖြင့် OX3-ရူပီးများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်း, ယဉ်ကျေးမှု cortisol-secreting adenoma ဆဲလ်များ၏တီထွင်ခဲ့တယ်လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်။ ) ။
3 ။ ကောက်ချက်။
အဆိုပါ secretagogue ၏ထိရောက်မှုကို (အကျယ်ချဲ့ထိရောက်သောအာရုံစူးစိုက်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးလာ) နှင့် orexins ၏ proliferogenic သက်ရောက်မှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2-ခြံခဲ့ကြသည်: နှစ်ဦးစလုံးအတွင်းသို့နှင့်ကြီးထွားတုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲထုတ်အတွက် orexins ၏ထိရောက်မှုကိုပုံမှန် adrenal cortex ထက် cortisol-secreting adenomas အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ နှင့် 3- မှ (adenomas အတွက်ပိုမိုမြင့်မား 4-ခေါက်Spinazzi et al ။ , 2005b) ။ ဤသည်လေ့လာရေးအတွက်ကို up-စည်းမျဉ်း adenomas အတွက် OX1-ရူပီးနှင့် OX2-ရူပီး၏အစီရင်ခံနှင့်, orexin-တစ်ဦးက synthesize မှ adenomas များ၏စွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ဦး autocrine-paracrine ယန္တရားမှတဆင့် endogenous orexin စနစ်ကပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြုနှင့်အတူကောင်းစွာညီ , cortisol-secreting adrenal ကျိတ်များ၏ pathogenesis ၌တည်၏။
စစ-orexin mRNA နှင့် orexin-တစ်ဦးကပရိုတိန်း ganglioneuroblastomas နှင့် neuroblastomas အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသော်လည်း, သူတို့သည် (pheochromocytomas အတွက်မတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်Arihara et al ။ , 2000) ။ ကှဲလှဲမှာ OX2-ရူပီး၏ OX1-ရူပီးပေမယ့်မဟူသောအသုံးအနှုနျး, mRNA နှင့်ပရိုတိန်းအဖြစ်, (ယခုအထိလေ့လာအားလုံးညင်သာပျော့ပျောင်းလူ့ pheochromocytomas အတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးMazzocchi et al ။ , 2001a; Blanco et al ။ , 2002).
2 ။ catecholamines Secret အပေါ် Orexins ၏ဆိုးကျိုးများ။
Mazzocchi et al ။ (2001a) အလုပျသငျထိရောက်သောအာရုံစူးစိုက်မှု 10 ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ pheochromocytoma ရပ်ကွက်ကနေ orexin-A နှင့် orexin-B က equipotently တိုးမြှင် catecholamines လျှို့ဝှက်ချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ပြသ-8 အမ် Orexins (10-8 မီတာ) IP ကိုနှိုးဆွပေး3ဒါပေမယ့်မရစခန်း, အကျိတ်အချပ်ကနေထုတ်လုပ်မှုနှင့် orexins မှ catecholamines အတွင်းသို့တုံ့ပြန်မှု PLC နှင့် PKC ရဲ့ inhibitors အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းနှင့် AC နှင့် PKA များ၏ inhibitors အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက် orexins အဆိုပါ PLC / PKC အချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့မှ coupled OX2-ရူပီးကနေတဆင့် pheochromocytoma လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
VI ကို။ နိဂုံးချုပ်မှတ်ချက်
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရှေ့အကဏ္ဍများ orexins အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အလားအလာအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှနိုင်မအကြံပြုခြင်း၎င်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေ့ရှိချက်ကနေကြာသည့်7နှစ်များတွင်စုဆောင်းခဲ့ကြကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ သို့သော်တော်တော်များများပြဿနာတွေဖြေရှင်းခံရဖို့ဆက်လက်တည်ရှိ, ကြှနျုပျတို့ယခုဧကန်အမှန်ထပ်မံစုံစမ်းအားထုတ်မှုစောင့်ဆိုင်းအချို့ကိစ္စရပ်များကိုဖော်ပြနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူကြမည်။
adrenal Secret အပေါ် orexin ၏စည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍဇီဝကမ္မအခြေအနေများအောက်တွင်သက်ဆိုင်ရာလား? သက်သေအထောက်အထားများ၏အမြောက်အများ orexins CRH-ACTH လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ orexin receptors နှင့်အတူပေးအပ်ထားတဲ့ PVN ရောက်ရှိ orexinergic အမျှင်၏တည်ရှိမှု, လွယ်ကူစွာ (အပိုင်း III.B. ကြည့်ပါ) pituitary gland အတွက် orexin receptors ၏ activation အဘို့အကယ်စင်စစ်မ CRH အပေါ် orexin ၏လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် AVP လွှတ်ပေးရန်အကောင့်ပေမယ်စေခြင်းငှါ ။ Nussdorfer (အဆိုအရ1996တစ်ဦးစည်းမျဉ်း peptide များ၏တစ်သျှူးအကြောင်းအရာ 100 fmol / g လျှင်), ၎င်း၏ 30% လွှတ်ပေးရန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 ၏ဒေသခံတစ်ဦးအာရုံစူးစိုက်မှုထုတ်လုပ်ရန်ပါလိမ့်မယ်-9 အမ်ကြွက်နှင့် 200 နှင့် 20 fmol / မီလီဂရမ်အကြားလူ့ hypothalamus အကွာအဝေး (ထဲတွင် orexin-တစ်ဦးကပြင်းအားArihara et al ။ , 2000; Spinazzi et al ။ , 2005b); ဤအရပ်မှသူတို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2× 10 ၏ဒေသခံ orexin-တစ်ဦးကအဆင့်ဆင့်မှမြင့်တက်ပေးနိုင်တယ်လို့-6 နှင့်2× 10-7 M က၎င်း, hypothalamopituitary ပေါ်တယ်အသွေးတော်ကနေတဆင့်, အ OX1-ရူပီးနှင့် pituitary gland မှာတွေ့ရှိ OX2-ရူပီးကိုသက်ဝင်နိုင်စွမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ orexins ၏ဤအလယ်ပိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဇီဝကမ္မဆက်စပ်မှုသွယ်ဝိုက် (အတုံး ACTH Secret hypothalamic orexin-လစ်လပ် narcoleptic လူနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုkok et al ။ , 2002) ။ တသမတ်တည်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိချက် orexins အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး၏အလယ်ပိုင်းကိုဌာနခှဲအပေါ်ဒါပေမယ့်လည်းတိုက်ရိုက် orexin receptors နှင့်အတူပေးအပ်ကြသည် adrenocortical ဆဲလ်တွေအပေါ်သာမကသရုပ်ဆောင် glucocorticoid လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်စေခြင်းငှါပြညွှန်။ , သို့သော် orexins ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏အဆုံးစွန်သောယန္တရား၏ဆက်စပ်မှုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေဆဲ: တကယ်တော့, 1 အတွက်) ကြွက်နှင့်လူသားတွေအတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ orexin-တစ်ဦး၏အဆင့် (15 နှင့်2pmol / ဌထက်မပိုပါဘူးArihara et al ။ , 2001; Jöhren et al ။ , 2001, 2003); အတွက်စသည်တို့ glucocorticoid secretagogue အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆွဲထုတ်အတွက် orexin-တစ်ဦး၏ 2) အနည်းငယ်မျှသာထိရောက်သောပြင်းအားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 များမှာ-8 နှင့် 10-10 ကြွက်များနှင့်လူသားတွေအတွက် M (အပိုင်း IV.B.2 ကြည့်ရှုပါ။ ); နှင့် 3) orexins မရှိတိုင်းတာပြင်းအားပုံမှန် adrenal ဂလင်းရှိ (အပိုင်း IV.A.1 ကြည့်ရှုပါ။ ), အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု autocrine-paracrine ယန္တရားများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အာဏာရ။ သို့သျောလညျးအစာရှောင်ခြင်းနှင့် hypoglycemia အဆိုပါ hypothalamus အတွက် orexin ပြင်းအားတိုးမြှင့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (Sakurai et al ။ , 1998; Cai et al ။ , 1999, 2001; Karteris et al ။ , 2005) နှင့် hypoglycemia (orexins ၏ပန်ကရိယလွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်Ouedraogo et al ။ , 2003), ဤအခြေအနေများအတွက် orexins ၏အသွေးပြင်းအားတိုက်ရိုက် adrenocortical ဆဲလ်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုနှိုးဆွနိုင်စွမ်းအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့နိုင်ကြောင်းဖယ်ထုတ်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်ဤဖြစ်နိုင်ခြေပုံအစာရှောင်တတ်သောကြွက် adrenal ဂလင်း (အတွင်း orexin အဲဒီ receptor စကားရပ်ကိုဆင်း-ထိန်းညှိသောမကြာသေးမီသရုပ်ပြမကိုက်ညီကြောင်းKarteris et al ။ , 2005) (အပိုင်း IV.A.2 ကြည့်ပါ။ ) ။ ဒီဆက်သွယ်မှုအတွက်ကျနော်တို့အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျသောအရာ leptin, (မှတ်မိချင်Remesar et al ။ , 1997; Mantzoros နှင့် Moschos, 1998; Ahima နဲ့လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေ, 2000) နှင့် hypothalamic အဆင့်တွင် orexin system နှင့်ဆက်သွယ်သည် (အပိုင်း VA ကိုကြည့်ပါ), Cushing ၏ရောဂါနှင့်အတူအဝလွန်ခြင်းနှင့် hyperglycemic လူနာများတွင်ပလာစမာပြင်းအားတိုးလာပြသ (Leal-Cerro et al ။ , 1996; Blum et al ။ , 1997; Weise et al ။ , 1999) ။ leptin (glucocorticoid Secret ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်သောကြောင့်Bornstein et al ။ , 1997; Glasow et al ။ , 1998; Pralong et al ။ , 1998; Glasow နှင့် Bornstein, 2000), ဖြစ်နိုင်ချေအတူတကွ leptin နှင့်အတူ orexins glucocorticoid Secret ၏မော်ဂျူမှတဆင့် glycemia နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် homeostasis များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသော, counterregulatory ယန္တရားများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူစခွေငျးငှါရှိမရှိစူးစမ်းခံရဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်, ဒီခေါင်းစဉ်တွင် Vivo စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ endogenous orexin system ကို stably နှိမ်နင်းသောတိရိစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှု (ဥပမာ orexin ဗီဇနောက်ကောက်တိရိစ္ဆာန်များ) အားသာချက်ယူနိုင်ဘူး။ တိကျတဲ့ပဋိနှင့်အတူ orexin receptors ၏ယခုအချိန်အထိ immunoblockade အတွက်စသည်တို့စမ်းသပ်ချက် (များတွင်အသုံးပြုထားသည်Spinazzi et al ။ , 2005c; Ziolkowska et al ။ , 2005), သို့သော်ဤချဉ်းကပ်မှု Vivo စမ်းသပ်ချက်အတွက်ရေရှည်အတွက် unfeasible ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လက်ရှိမှာတစ်ခုသာရွေးချယ်ရသေးစီးပွားဖြစ်ကိုမရရှိနိုင် OX1-R ကို nonpeptide ရန် (SB-334867) (ဖန်တီးထားပြီးအထမ်းသမား et al ။ , 2001; စမတ် et al ။ , 2001).
adrenal နှင့် gonadal orexin စနစ်များအကြားရှိအလုပ်လုပ်တဲ့ interrelationships ဖြစ်ပါသလား Orexin immunoreactivity ကြွက် testis အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး (Mitsuma et al ။ , 2000), orexin receptors (ကြွက်နှင့်လူ့ testis အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်Jöhren et al ။ , 2001; Barreiro et al ။ , 2004; Karteris et al ။ , 2004), နှင့် orexin-တစ်ဦးက (ထိုကြွက်များတွင် Vivo နှင့်စသည်တို့အတွက်နှစ်ဦးစလုံး testosterone ဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်အစီရင်ခံထားသည်Barreiro et al ။ , 2004) ။ ကြွက် hypothalamus orexin စကားရပ် proestrus နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တိုးပွါးအတွက်ပေမယ့် (အပိုင်း III.A.1 ကြည့်ရှုပါ။ ), adrenals အတွက် orexin အဲဒီ receptor စကားရပ်အီစထိုဂျင်အားဖြင့်၎င်း, တက်-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အန်ဒရိုဂျင်အားဖြင့် (အပိုင်းကိုတွေ့မြင်ချ-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရဖို့ပုံပေါ် IV.A .2 ။ ) ။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်ဟာ testis orexin စနစ်နှင့် gonadal ဟော်မုန်းဟာ HPA ဝင်ရိုးအတွင်း orexin စနစ်ကစကားရပ်များတွင်ကျားမ-related ကွဲပြားမှုများအတွက်အကောင့်စခွေငျးငှါရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်ဖို့လိုအပ်နေပါသည် (အပိုင်း IV.A.2 ကြည့်ပါ။ ) ။
adrenal ကျိတ်များ၏ pathophysiology မှာပါဝင်နေတဲ့ orexin စနစ်တစ်ခုဖြစ်သနည်း cortisol-secreting adrenal adenomas တက်-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် orexin receptors အပိုင်ဒါပေမယ့်လည်းဒေသခံပြင်းအားမှမြင့်တက်ပေးနိုင်သည့် orexin-တစ်ဦးက (12 fmol / မီလီဂရမ်) ၏သာရှိပြီးပမာဏဆံ့ဖို့မသာတွေ့ရှိခဲ့သည် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10-7 ကောင်းစွာစသည်တို့အတွင်းသို့နှင့်တီထွင်ခဲ့တယ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ထုတ်ယူနိုင်သူတွေကိုအထက် M က) (အပိုင်း vB ကြည့်ပါ) ။ adrenal medulla ကနေ catecholamines ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် orexin ၏ဆိုးကျိုးများ (အပိုင်း IV.B.4 ကြည့်ရှုပါ။ ) သံသယဖြစ်ကြသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း orexins (အပိုင်း VC2 ကြည့်ရှုပါ။ ) လူ့ pheochromocytomas ထံမှ catecholamines လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ပြပြီ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အ orexin pheochromocytomas ၏အကြောင်းအရာမျှမကျိတ်ဆဲလ်ကြီးထွားအပေါ်ဖြစ်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မလေ့လာခဲ့ပြီ။ အပိုဆောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက် orexin စနစ်ကလျှို့ဝှက်ချက်နှင့် adrenal ကျိတ်များ၏ကြီးထွားမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍသောနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းဖို့ထွက်သယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤမေးခွန်းများကိုမှအဖြေ, orexin receptors ၏အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ်ရန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, အ HPA ဝင်ရိုး၏ဇီဝြဖစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးပွားစေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်လည်း adrenal function ကို၏ dysregulation မှ coupled အများအပြားရောဂါများကုထုံးအသစ်အမြင်များဖွင့်နိုင်မသာ ။
ကျနော်တို့အတွင်းရေးမှူးထောက်ခံမှုနှင့် bibliographic ပစ္စည်းများကို၏ပြဌာန်းချက်အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကူအညီတောင်းအယ်လ်ဘာတာကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
↵1 အတိုကောက်: OX1-R, orexin အမျိုးအစား 1 အဲဒီ receptor; OX2-R, orexin အမျိုးအစား2အဲဒီ receptor; HPA, hypothalamic-pituitary-adrenal; NPY, neuropeptide Y ကို; စစ, prepro; Cho, တရုတ်ဟမ်းစတား Ovary; PLC, phospholipase ကို C; အိုင်ပီ3, inositol triphosphate; PK, ပရိုတိန်း kinase; AC အ, adenylate cyclase; ICC က, immunocytochemistry; PVN, paraventricular နျူကလိယ; RT ကို, ကူးယူ reverse; PCR, polymerase ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု; ACTH, adrenocorticotropic ဟော်မုန်း; CRH, corticotropin-releasing ဟော်မုန်း; AVP, မိုင်နိုအက်စစ်-vasopressin; ZF, zona fasciculata; ZG, zona glomerulosa; ZR, zona reticularis; စတုရန်းမိုင်-22536, 9- (tetrahydro-2'-furyl) အက်ဒနင်း; H89, N-[2-(4-bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinoline; U-73122, 1-[6-[[17β-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl]amino]hexyl]-1H-pyrrole-2,5-Dion; MAPK, mitogen-activated ပရိုတိန်း kinase; PD98059, 2'-အမိုင်နို-3'-methoxyflavone; SB203580, 4- (4-fluorophenyl) -2- (4-methylsulfinylphenyl) -5- (4-pyridyl) 1H-imidazole; SB-334867, 1-(2-methylylbenzoxanzol-6-yl)-3-(1,5)naphthyridin-4-yl-urea hydrochloride.
Doi: 10.1124 / pr.58.1.4 ။
Ahima သည် RS နဲ့လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေ JS (2000) Leptin ။ Annu ဗြာ Physiol 62: 413-437 ။
al-Barazanji Ka, Wilson က S နဲ့, Baker J ကို, Jessop DS နှင့် Harbuz က MS (2001) ဗဟို orexin-တစ်ဦးက hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သတိကြွက်များတွင်အာရုံခံ vasopressin hypothalamic corticotropin လွှတ်အချက်နှင့်မိုင်နိုအက်စစ်ကိုလှုံ့ဆျော။ J ကို Neuroendocrinol 13: 421-424 ။
Ammoun S က, Holmqvist T က, Shariatmadari R ကို, Oonk HB, Detheux M က, Parmentier M က, Åkerman KEO နှင့် Kukkonen JP (2003) orexin peptides အားဖြင့် OX1 နှင့် OX2 receptors ၏ထူးခြားသောအသိအမှတ်ပြုမှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther 305: 507-514 ။
Arihara Z ကို, Takahashi K ကို Murakami, အို Totsune K ကို Sone M က, Satoh က F, Ito က S နဲ့, Hayashi Y ကို, Sasano H ကိုနှင့် ganglioneuroblastoma နှင့် neuroblastoma ၏လူ့ဦးနှောက်နှင့်အကျိတ်တစ်ရှူးအတွက် Mouri T က (2000) Orexin-တစ်ဦး။ Peptides 21: 565-570 ။
Arihara Z ကို, Takahashi K ကို Murakami, အို Totsune K ကို Sone M က, Satoh က F, Ito က S နဲ့, လူ့သွေးရည်ကြည်အတွက် Mouri T က (2001) Immunoreactive orexin-တစ်ဦး။ Peptides 22: 139-142 ။
Baker JR, Cardinal K ကို Bober ကို C, တေလာဟာ MM နှင့်ရှံဆုန် wk (2003) Neuropeptide W prolactin, corticosterone နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရန်ထိန်းချုပ်ဖို့ဦးနှောက်အတွက်ဆောင်ရွက်သည်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 144: 2816-2821 ။
Barreiro ML, Pineda R ကို, Navarro VM က, လိုပက်ဇ်က M, Suominen JS, Pinilla L ကို, Señaris R ကို, Toppari J ကို, Aguilar အီး, Dieguez ကို C, et al ။ (2004) Orexin 1 ကြွက် testis အတွက် orexin-တစ်ဦးတို့က testosterone ဟော်မုန်း Secret ၏ receptor တမန် ribonucleic အက်ဆစ်စကားရပ်နှင့်အဆွ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 145: 2297-2306 ။
Beuckmann မှန် CT နှင့် Yanagisawa က M (2002) Orexins: neuropeptides ကနေစွမ်းအင် homeostasis နှင့်အိပ်စက်ခြင်း / ပါတီအားစည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။ J ကို Mol Med 80: 329-342 ။
Blanco က M, orexin လူ့ adrenal gland အတွက် receptors, adrenocortical adenomas နှင့် pheochromocytomas ၏ Garcia က-Caballero T က, Fraga M က, Gallego R ကို, Cuevas J ကို, Forteza J ကို, Beira တစ်ဦးနှင့် Dieguez ကို C (2002) ဆယ်လူလာမူပြောင်းခြင်း။ စည်းမျဉ်း Pept 104: 161-165 ။
Blanco M က, လိုပက်ဇ်က M, Garcia က-Caballero T က, Gallego R ကို, Vazquez-Boquete တစ်ဦးက, Morel, G, Señaris R ကို, Casanueva က F, Dieguez ကို C နှင့် Beira တစ်ဦးက (2001) လူ့ pituitary အတွက် orexin receptors ၏ဆယ်လူလာမူပြောင်းခြင်း။ J ကို Clin Endocrinol Metab 86: 1616-1619 ။
Blum WF, Englaro P ကို, Hanitsch S က, Juul တစ်ဦးက, Hertel NT, Muller J ကို, et al Skakkebaek NE, Heiman ML, Birkett M က, Attanasio လေး။ ကျန်းမာကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် (1997) Plasma leptin အဆင့်ဆင့်: ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းအပေါ်မှီခို, ခန္ဓာကိုယ်အဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်, ကျား, မ, pubertal ဇာတ်စင်နှင့် testosterone ဟော်မုန်း။ J ကို Clin Endocrinol Metab 82: 2904-2910 ။
Bornstein SR (1997) တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှု related peptide leptin ပါသလား နတ် Med 3: 397 ။
Bornstein SR, အ adrenal gland ရန်ဇီဝဖြစ်စဉ် signal ကိုအဖြစ် leptin တစ်ဝတ္ထုရံအရေးယူဘို့ Uhlmann K ကို Haidan တစ်ဦးက, Ehrhart-Bornstein M ကများနှင့် Scherbaum WA (1997) အထောက်အထား: leptin တိုက်ရိုက် cortisol လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ 46: 1235-1238 ။
ဗဟို orexin-တစ်ဦးကအုပ်ချုပ်ဖို့ Brunton PJ နှင့်စယ်ဂျေအေ (2003) Hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက်များတွင်နှိမ်နင်းလျက်ရှိသည်။ J ကို Neuroendocrinol 15: 633-637 ။
Cai XJ, အီဗန် ML, Lister, CA, Leslie RA, Arch JRS, Wilson က S ကများနှင့်ဝီလျံ, G (2001) Hypoglycemia orexin အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ် hypothalamic orexin-B ကိုအဆင့်ဆင့်တိုးပွါး: အစာကျွေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်တိုက်ပိတ်၏နျူကလိယကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြင့် inhibited တုံ့ပြန်မှု ကျေးရွာအုပ်စု။ ဆီးချိုရောဂါ 50: 105-112 ။
Cai XJ, Widdowson PS, Harrold J ကို, Wilson က S နဲ့, ဘာကင်ဟမ် RE, Arch JR, Tadayyon M က, Clapham JC, Wild J ကိုနှင့်ဝီလျံ, G (1999) Hypothalamic orexin စကားရပ်: အသွေးသည်ဂလူးကို့စနှင့်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့်မော်ဂျူ။ ဆီးချိုရောဂါ 48: 2132-2137 ။
Chemelli RM, ဝီလီ JT, Sinton CM, Elmquist JK, Scammell T ကလီကို C ရစ်ချတ်ဆင်ဂျာ et al Williams က SC, Xiong Y ကို, Kisanuki Y ကို။ orexin နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာ (1999) Narcolepsy: အိပ်စက်ခြင်းစည်းမျဉ်း၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ cell 98: 437-451 ။
ချန်မှန် CT, ဒွန်း SL, Kwok Eh, ဒွန်း NJ နှင့် Chang-JK (1999) Orexin ကြွက်ဦးနှောက်အတွက် A-တူသော immunoreactivity ။ neuroscience လက်တ 260: 161-164 ။
Cluderay je, Harrison, DC နှင့် Hervieu GJ (2002) ကိုကြွက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်း orexin-2 အဲဒီ receptor ၏ပရိုတိန်းဖြန့်ဖြူး။ စည်းမျဉ်း Pept 104: 131-144 ။
cholecystokinin ၏ Crawley ဖြစ်မှုနှင့် Corwin RL (1994) ဇီဝဗေဒလုပ်ရပ်တွေကို။ Peptides 15: 731-755 ။
Cutler DJ သမား, et al မောရစ် R ကို, Sheridhar V ကို, Wattam က TA, Holmes က S, Patel က S နဲ့, Arch JR, Wilson က S နဲ့, ဘာကင်ဟမ် RE, အီဗန် ML ။ (1999) ကိုကြွက်ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးထဲမှာ orexin-A နှင့် orexin-B က immunoreactivity ၏ဖြန့်ဖြူး Differential ။ Peptides 20: 1455-1470 ။
Dallman MF, Akana SF, Bhatnagar S ကိုဘဲလ် ME, Choi က S, Chu တစ်ဦးက, Horsley ကို C, Levin N ကို, Meijer အို Soriano LR, et al ။ (1999) ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး: အစောပိုင်းအချက်ပြမှုများ, အာရုံခံကိရိယာများနှင့် sequelae ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 135: 4015-4023 ။
နေ့စွဲ Y ကို, Mondal က MS, Matsukura S က, Ueta Y ကို, Yamashita H ကို, Kaiya H ကို, Kangawa K နှင့် Nakazato M (2000) ကိုကြွက်ပျမ်းမျှထူးမြတ်သောနှင့် pituitary အတွက် orexin / hypocretin ၏ဖြန့်ဖြူး။ Mol ဦးနှောက် Res 76: 1-6 ။
နေ့စွဲ Y ကို, Ueta Y ကို, Yamashita H ကို, ယာမာဂူချီ H ကို, Matsukura S က, Kangawa K ကို Sakurai T က, Yanagisawa က M နှင့် Nakazato M (1999) Orexins, orexigenic hypothalamic peptides, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, neuroendocrine နှင့် neuroregulatory စနစ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 96: 748-753 ။
et al de Lecea L ကို, Kilduff TS, Peyron ကို C, Gao xB, Foye PE, Danielson PE, Fukuhara ကို C, Battenberg elf, Gautvik VT, Bartlett FS ။ (1998) က hypocretins: neuroexcitatory လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ hypothalamus-တိကျတဲ့ peptides ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 95: 322-327 ။
de Lecea L ကိုနှင့် Sutcliffe JG (1999) က hypocretins / orexins: ကွဲပြားခြားနားသောဇီဝကမ္မစနစ်များပါဝင်ပတ်သက်ဝတ္ထု hypothalamic neuropeptides ။ cell Mol ဘဝကသိပ္ပံ 56: 473-480 ။
ဒိုင်ယာ CJ, ​​Touchette KJ, ကာရိုးဂျာ Allee GL နှင့် Matteri RL (1999) porcine prepro-orexin cDNA နှင့်လူငယ်ဝက်အတွက်အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်ဒြပ် porcine orexin-B ကိုတစ်ဦးအသားထိုးဆေး၏ဆိုးကျိုးများ၏ကိုယ်ပွား။ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျမြား Endocrinol 16: 145-148 ။
revisited ဟောင်းအယူအဆ: Engelmann M က, Landgraf R ကိုနှင့် Wotjak မှန် CT (2004) က hypothalamic-neurohypophyseal စနစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုအောက်ရှိ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးထိန်းညှိ။ တပ်ဦး Neuroendocrinol 25: 132-149 ။
ဖာဂူဆန် AV စနစ်နှင့်ရှံဆုန် wk (2003) က orexin / hypocretin စနစ်က: neuroendocrine နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ function ကိုတစ်ဦးဝေဖန်ထိန်းညှိ။ တပ်ဦး Neuroendocrinol 24: 141-150 ။
Funahashi H ကို, ဟောရိ T က, Shimoda Y ကို, Mizushima H ကို, Ryushi T က, Katoh S ကို, နှင့် hypothalamus အတွက် leptin နှင့် orexin အကြားအာရုံကြော interaction ကအတှကျ Shioda S ကို (2000) Morphological သက်သေအထောက်အထား။ စည်းမျဉ်း Pept 92: 31-35 ။
Glasow A နှင့် Bornstein SR (2000) Leptin နှင့် adrenal gland ။ EUR J ကို Clin Invest 3: 39-45 ။
Glasow တစ်ဦးက, Haidan တစ်ဦးက, Hilbers ဦး, Breidert M က, Gillespie J ကို, Scherbaum WA, Chrousos မိသားစုဆရာဝန်နှင့်သာမန်လူ့ adrenals အတွက် Ob အဲဒီ receptor ၏ Bornstein SR (1998) Expression: leptin အားဖြင့် adrenocortical နှင့် adrenomedullary function ကို၏ differential ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ J ကို Clin Endocrinol Metab 83: 4459-4466 ။
Heiman ML, Ahima RS, Craft LS, Schoner B, Stephens TW နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်အတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေ JS (1997) Leptin တားစီး။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 138: 3859-3863 ။
ကြွက်ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးထဲမှာ orexin-2001 အဲဒီ receptor ၏ Hervieu GJ, Cluderay je, Harrison, DC, Roberts သည် JC နှင့် Leslie RA (1) Gene စကားရပ်များနှင့်ပရိုတိန်းဖြန့်ဖြူး။ neuroscience 103: 777-797 ။
Hochólတစ်ဦးက, Albertin, G, Nussdorfer GG, Spinazzi R ကို, Ziolkowska တစ်ဦးက, Rucinski M ကများနှင့် Malendowicz LK (2004) neuropeptides B နဲ့ဒဗလျူသက်ရောက်မှုကြွက် adrenocortical ဆဲလ်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုနှင့်တိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်။ int J ကို Mol Med 14: 843-847 ။
Holmqvist T က, Åkerman KEO နှင့် Kukkonen JP (2001) neuropeptide Y ကိုများနှင့်အခြား neuropeptides ကျော် orexins လူ့ orexin receptors ၏အမြင့်သတ်မှတ်ချက်။ neuroscience လက်တ 305: 177-180 ။
Holmqvist T က, Johansson L ကို, Östman M က, Ammount ကို S, Åkerman KEO နှင့် Kukkonen JP (2005) OX1 orexin မျိုးစုံယန္တရားများမှတဆင့် adenylyl cyclase စည်းမျဉ်းမှစုံတွဲတစ်တွဲ receptors ။ J ကို Biol Chem 280: 6570-6579 ။
Horvath T က, Diano S ကို, နှင့်ကြွက်နှင့်မျောက် hypothalamus အတွက် hypocretin (orexin) နှင့် neuropeptide Y ကိုဆဲလ်တွေအကြားဗန်တွင်း Pol AN (1999) Synaptic အပြန်အလှန်: ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့် endocrine စည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရတဲ့ဝတ္ထု circuit ကို။ J ကို neuroscience 19: 1072-1087 ။
Hung M နှင့် Mignot အီး (2001) Hypocretin / orexin, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့် narcolepsy ။ Bioessays 23: 397-408 ။
ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် orexin ၏ Ida T က, Nakahara K ကို Murakami T က, Hanada R ကို, Nakazato M ကများနှင့် Murakami N ကို (2000) ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community 270: 318-323 ။
Jaszberényi M က, Bujdosóအီး, Pataki ငါနှင့် Telegdy, G (2000) ကို hypothalamic-pituitary-adrenal system ပေါ်တွင် orexins သက်ရောက်မှု။ J ကို Neuroendocrinol 12: 1174-1178 ။
Jaszberényi M က, Bujdosóအီးနှင့် Telegdy, G (2001) orexin-သွေးဆောင် hypothalamic-pituitary-adrenal activation အတွက် neuropeptide Y ကို၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Neuroendocrinol 13: 438-441 ။
JöhrenအိုBrüggemann N ကို, Dendorfer တစ်ဦးနှင့် Dominiak P ကို ​​(2003) Gonadal steroids differential pituitary orexin အမျိုးအစား 1 receptors နှင့် adrenal orexin အမျိုးအစား2receptors ၏တမန် ribonucleic အက်ဆစ်စကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 144: 1219-1225 ။
JöhrenအိုBrüggemann N ကိုနှင့် Dominiak P ကို ​​(2004) Orexins (hypocretins) နှင့် adrenal function ကို။ Horm Metab Res 36: 370-375 ။
Jöhrenအို Neidert SJ, Kummer M က, Dendorfer တစ်ဦးနှင့် Dominiak P ကို ​​(2001) Prepro-orexin နှင့် orexin အဲဒီ receptor mRNAs differential ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များ၏အရံတစ်ရှူးများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 142: 3324-3331 ။
ကိန်း JK, Tanaka H ကို, က Parker SL, Yanagisawa က M နှင့်လီ MD (2000) orexin-A, C ကို inhibitors phospholipase မှ binding neuropeptide Y နှင့် secretin ၏အာရုံ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community 272: 959-965 ။
ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Kanenishi K ကို Ueno က M, Momose S က, Kuwabara H ကို, Tanaka H ကို, Sato က C, Kobayashi T က, Hino အို Sakamoto H ကိုနှင့် Hata T က (2004) Prepro-orexin mRNA စကားရပ်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းတိုးလာနေပါတယ်။ neuroscience လက်တ 368: 73-77 ။
Karteris E ကို, ချန် J ကို, လူ့ prepro-orexin နှင့်အထီးမျိုးပွားမှုစနစ်အတွက် orexin receptors ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပြ၏ Randeva HS (2004) Expression ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 89: 1957-1962 ။
Karteris အီး, Machado RJ, Chen က J ကို, Zervou S က, Hillhouse EW နှင့် Randeva HS (2005) အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ differential ကြွက် hypothalamus နှင့် adrenal cortex အတွက် orexin အဲဒီ receptor စကားရပ်များနှင့်အချက်ပြ modulates ။ နံနက် J ကို Physiol 288: E1089-E1100 ။
လူ့သန္ဓေသား adrenals အတွက် CRH နှင့် orexin အမျိုးအစား 2001 receptors ၏ Karteris အီး, Randeva HS, Grammatopoulos DK, Jaffe RB နှင့် Hillhouse EW (2) ဖော်ပြမှုနှင့်နားချင်းဆက်မှီဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 86: 4512-4519 ။
Kastin AJ နှင့် Akerstrom V ကို (1999) Orexin တစ်ပေမယ် B ကို orexin မဟုတ်လျှင်မြန်စွာရိုးရှင်းသောပျံ့နှံ့ခြင်းဖြင့်သွေးကနေဦးနှောက်ထဲသို့ဝင်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 289: 219-223 ။
Kawada Y ကို, Ueno က S, Asayama K ကို Tsutsui M က, Utsunomiya K ကို Toyohira Y ကို, Morisada N ကို, တာနာကာ K ကို Shirahata တစ်ဦးနှင့် Yanagihara N ကို catecholamines ပေါင်းစပ်၏ (2003) စိတ်ကြွဆေး bovine adrenal medullary ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ orexin-တစ်ဦးတို့က orexin အဲဒီ receptor မှတဆင့် 1 ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol 66: 141-147 ။
kok SW, Roelfsema က F, Overeem S က, Lammers GJ, Strijers RL, Frölich M က, Meinders AE နှင့် Pijl H ကို hypocretin-လစ်လပ် narcoleptic သညျလူသားတို့အတွက် pituitary-adrenal ensemble ၏ (2002) Dynamics ကို: ပုံမှန်အချိန်တုံး Basal adrenocorticotropin လွှတ်ပေးရန်နှင့်သက်သေအထောက်အထား မာစတာ pacemaker ခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။ J ကို Clin Endocrinol Metab 87: 5085-5091 ။
အဆိုပါ Djungarian ဟမ်းစတားများ၏ဦးနှောက်အတွင်း Khorooshi RMH နှင့် Klingenspor M (2005) melanin-အာရုံဟော်မုန်း၏အာရုံခံဖြန့်ဖြူး, cocaine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်းနှင့် orexin B က (Phodopus sungorus) ။ J ကို Chem Neuroanat 29: 137-148 ။
Kreegipuu တစ်ဦးက, Blom N ကိုနှင့် Brunak S ကို (1999) PhosphoBase, phosphorylation က်ဘ်ဆိုက်များတစ်ဒေတာဘေ့စ: 2.0 လွှတ်လိုက်ပါ။ Nucleic Acid Res 27: 237-239 ။
Krysiak R ကို, Obuchowicz အီး, နှင့် neuropeptide Y ကိုစနစ်နှင့်ယင်း hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအကြား Herman ZS (1999) ဆက်သွယ်မှုသည်။ EUR J ကို Endocrinol 140: 130-136 ။
အဆိုပါ orexinergic / hypocretinergic စနစ်၏ Kukkonen JP, Holmqvist T က, Ammoun S ကိုနှင့်Åkerman KEO (2002) Functions များ။ နံနက် J ကို Physiol 283: C1567-C1591 ။
Kuru M က, Ueta Y ကို, Serino R ကို, Nakazato M က, Yamamoto Y ကို, ရှိဘုယ, ငါသည်နှင့် Yamashita H ကို (2000) ဗဟိုအုပ်ချုပ် orexin / hypocretin ကြွက်များတွင် HPA ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်။ Neuroreport 11: 1977-1980 ။
Larsson KP, Peltonen HM, Bart, G, Louhivuori LM, Penttonen တစ်ဦးက, Antikainen M က, Kukkonen JP နှင့်Åkerman KEO (2005) Orexin-A-သွေးဆောင် Ca2+ entry ကို: TRPC လိုင်းများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ပရိုတိန်း kinase ကို C စည်းမျဉ်း။ J ကို Biol Chem 280: 1771-1781 ။
Leal-Cerro A၊ Considine RV၊ Peino R၊ Venegas E၊ Astorga R၊ Casanueva FF နှင့် Dieguez C (1996) သွေးရည်ကြည် immuno-reactive leptin အဆင့်တိုးမြှင့်သည်။ Horm Metab Res 28: 711-713 ။
Lin က L ကို, Faraco J ကိုလီ R ကို, Kadotani H ကို, ရော်ဂျာ W က, Lin က X ကို, Qiu X ကို, De Jong PJ, Nishino က S နှင့် Mignot အီး (1999) ကအိပ်စက်ခြင်းရောဂါခွေးတစ်ကောင် narcolepsy အဆိုပါ hypocretin (orexin) တွင်တစ်ဦး mutation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီ receptor2ဗီဇ။ cell 98: 365-376 ။
လိုပက်ဇ်က M, Señaris R ကို, Gallego R ကို, Garcia က-Caballero T က, ဂို့က F, Seoane L ကို, Casanueva က F နှင့် Dieguez ကို C (1999) Orexin receptors ကြွက်များ၏ adrenal medulla အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 140: 5991-5994 ။
လိုပက်ဇ်က M, Seoane L ကို, Garcia က MC, ဂို့က F, Casanueva FF, Señaris R ကို, နှင့် hypothalamus အတွက် prepro-orexin နှင့် orexin အဲဒီ receptor mRNA အဆင့်ဆင့်၏ Dieguez ကို C (2000) Leptin စည်းမျဉ်း။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community 269: 41-45 ။
လိုပက်ဇ်က M, Seoane L ကို, Señaris RM နှင့် Dieguez ကို C (2001) Prepro-orexin mRNA အဆင့်ဆင့်ကြွက် hypothalamus နှင့် orexin အဲဒီ receptor အတွက်ကြွက် hypothalamus နှင့် adrenal gland အတွက် mRNA အဆင့်ဆင့်ဟာသိုင်းရွိုက် status ကိုလွှမ်းမိုးမှုမရှိပါ။ neuroscience လက်တ 300: 171-175 ။
lu XY, Bagnol: D, Burke က S နဲ့, Akil H ကိုနှင့် Watson ဟာ SJ (2000) အစာရှောင်ခြင်းအပျေါမှာဦးနှောက်ထဲမှာ OX1 နှင့် OX2 orexin / hypocretin အဲဒီ receptor messenger ကိုအာအန်အေ၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်း Differential ။ Horm ပြုမူနေ 37: 335-344 ။
Lund PE, Shariatmadari R ကို, Uustare တစ်ဦးက, Detheux M က, Parmentier M က, Kukkonen JP နှင့်Åkerman KEO (2000) က orexin OX1 အဲဒီ receptor တစ်ဝတ္ထု Ca မြှင့်လုပ်ဆောင်2+ C. J ကို Biol Chem 275 phospholipase မှနားဆက်မှီရာတွင်များအတွက်လိုအပ်သောရောက်လာလမ်းကြောင်း: 30806-30812 ။
Malendowicz LK, Hochólတစ်ဦးက, Ziolkowska တစ်ဦးက, Nowak M က, Gottardo L ကိုနှင့် Nussdorfer GG (2001a) အချိန်ကြာမြင့်စွာ orexin အုပ်ချုပ်ရေးကြွက် adrenal gland အပေါ်တိုက်ရိုက်သရုပ်ဆောင်, Steroid တစ်မျိုး-ဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်ကိုလှုံ့ဆျော။ int J ကို Mol Med 7: 401-404 ။
အဆိုပါအတွင်းသို့နှင့်နုနှင့်အသစ်ပြန်ထွက်ကြွက် adrenal ဂလင်း၏တီထွင်ခဲ့တယ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် orexins A နှင့် B ၏ Malendowicz LK, Jedrzejczak N ကို, Belloni AS, Trejter M က, Hochólတစ်ဦးနှင့် Nussdorfer GG (2001b) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Histol Histopathol 16: 713-717 ။
Malendowicz LK, Nowak M က, Gottardo L ကို, Tortorella ကို C, Majchrzak M ကများနှင့် Nussdorfer GG (2001c) Cholecystokinin 1 နှင့်2အဆိုပါ adenylate cyclase-မှီခိုအဆငျ့ဆငျ့နှင့်အတူ coupled cholecystokinin receptors မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်, ကွဲပြားသောကြွက် zona glomerulosa ဆဲလ်ကနေ aldosterone လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလှုံ့ဆျော။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 142: 4251-4255 ။
Malendowicz LK, Spinazzi R ကို, Majchrzak M က, Nowak M က, Nussdorfer GG, Ziolkowska တစ်ဦးက, Macchi ကို C နှင့် Trejter M ကကြွက် pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုးပေါ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာ cholecystokinin အုပ်ချုပ်ရေး (2003) အကျိုးသက်ရောက်မှု: အ CCK အဲဒီ receptor Subtype 1 နှင့်2၏အခန်းကဏ္ဍ။ int J ကို Mol Med 12: 903-909 ။
Malendowicz LK, Tortorella ကို C နှင့် Nussdorfer GG (1999a) Orexins အဆိုပါ adenylate cyclase-မှီခိုအချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့၏ activation မှတဆင့်ကြွက် adrenocortical ဆဲလ် corticosterone လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း။ J ကို Steroid တစ်မျိုးထဲကဓာတုပစ်စညျး Mol Biol 70: 185-188 ။
Malendowicz LK, Tortorella ကို C နှင့် Nussdorfer GG (1999b) ကိုကြွက် pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုးအပေါ် orexins A နှင့် B ၏ထူးခြားသောသက်ရောက်မှု။ Biomed Res 20: 301-304 ။
လူ့ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့် pathophysiology အတွက်အခန်းကဏ္ဍ (s) ရှာဖွေရေးအတွက်: Mantzoros CS နှင့် Moschos SJ (1998) Leptin ။ Clin Endocrinol (အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်) 49: 551-567 ။
Marcus ဖြစ်မှု, Aschkenasi CJ, Lee ကအီး, Chemelli RM, Saper သမဝါယမ, Yanagisawa က M နှင့် Elmqvist JK (2001) ကိုကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin receptors 1 နှင့်2၏စကားရပ် Differential ။ J ကို comp Neurol 435: 6-25 ။
Matsumura K ကို Tsuchihashi T ကနှင့်ရှင်ဇိုအာဘေးငါ (2001) ဗဟို orexin-တစ်ဦးကသတိယုန်အတွက် sympathoadrenal ထွက်သွားကြီးထွားများပြားစေ။ သွေးတိုး 37: 1382-1387 ။
Mazzocchi, G, Malendowicz LK, Aragona က F, Rebuffat P ကို, Gottardo L ကိုနှင့် Nussdorfer GG (2001a) လူ့ pheochromocytomas orexin အဲဒီ receptor အမျိုးအစား2ဗီဇကိုဖော်ပြခြင်းနှင့် orexins A နှင့် B တွင် J ကို Clin Endocrinol Metab 86 ဖို့အတွက်စသည်တို့အတွင်းသို့တုံ့ပြန်မှုဖော်ပြရန်: 4818-4821 ။
Mazzocchi, G, Malendowicz LK, Aragona က F, Spinazzi R ကိုနှင့် Nussdorfer GG (2004) Cholecystokinin (CCK) ကို adenylate cyclase / ပရိုတိန်းမှ coupled CCK2 receptors ကနေတဆင့်လူ့ adrenocortical ဆဲလ်ကနေ aldosterone လျှို့ဝှက်ချက်ကိုတစ်ဦးကအချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့ kinase လှုံ့ဆော်။ J ကို Clin Endocrinol Metab 89: 1277-1284 ။
Mazzocchi, G, Malendowicz LK, Gottardo L ကို, Aragona က F နှင့် Nussdorfer GG (2001b) Orexin တစ်ဦးကအဆိုပါ adenylate cyclase-မှီခိုအချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့၏ activation မှတဆင့်လူ့ adrenocortical ဆဲလ်ကနေ cortisol လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလှုံ့ဆျော။ J ကို Clin Endocrinol Metab 86: 778-782 ။
Mazzocchi, G, Rebuffat P ကို, Ziolkowska တစ်ဦး, ရော့စီမိသားစုဆရာဝန်, Malendowicz LK နှင့် Nussdorfer GG (2005), G ပရိုတိန်း receptors (GPR)7နှင့် 8 လူ့ adrenocortical ဆဲလ်နှင့်၎င်းတို့၏ endogenous ligands neuropeptides B နဲ့ဒဗလျူအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် adenylate ကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် cortisol လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမြှင့်တင်ရန် cyclase- နှင့် phospholipase ကို C-မှီခိုအချက်ပြကက်စကိတ်။ J ကို Clin Endocrinol Metab 90: 3466-3471 ။
McGranaghan PA ဆိုပြီးနှင့် Piggins HD ကို (2001) ကိုဆီးရီးယားဟမ်းစတား (များ၏ hypothalamus နှင့် thalamus အတွက် Orexin တစ်ဦးကဲ့သို့ immunoreactivityMesocricetus auratus) နှင့်ဆိုက်ဘေးရီးယားဟမ်းစတား (Phodopus sungorus), ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian အဆောက်အဦများအထူးရည်ညွှန်းအတူ။ ဦးနှောက် Res 904: 234-244 ။
Meier, CA (1998) Orexins နှင့် anorexins: စားစရာဘို့အတှေး။ EUR J ကို Endocrinol 139: 148-149 ။
Mignot အီး (2001) ကို hypocretin / orexin စနစ်၏ neurobiology အပေါ်တစ်ဦးကမှတ်ချက်ပြု။ Neuropsychopharmacology 25: S5-S13 ။
Mitsuma T က, Hirooka Y ကို, Kayama M က, Mori Y ကို, Yokoi Y ကို, Rhue N ကို, Ping J ကို, Izumi M က, Ikai R ကို, Adachi K သည်, et al ။ orexin အေဘဝကသိပ္ပံ 2000 များအတွက် (66) Radioimmunoassay: 897-904 ။
Moreno, G, Perello M က, Gaillard RC နှင့် Spinedi အီး (2005) Orexin တစ်ဦးကအပြည့်အဝ hypothalamic NPY-ergic လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး function ကို, ဒါပေမယ့်မရအစားအစာစားသုံးမှုကိုလှုံ့ဆျော။ endocrine 26: 99-106 ။
Nakabayashi M က, ဆူဇူကီး T က, Takahashi K ကို Totsune K ကို Muramatsu Y ကို, Kaneko က C, et al နေ့စွဲက F, Takeyama J ကို, တောမြိုးစေ့အေဒီ, Moriya T က။ (2003) Orexin-တစ်ဦးကလူ့ရံတစ်ရှူးအတွက်စကားရပ်။ Mol ဆဲလ် Endocrinol 205: 43-50 ။
Nambu T က, Sakurai T က, Mizukami K ကို Hosoya က Y, Yanagisawa က M နှင့် Goto K သည်အရွယ်ရောက်သူကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin အာရုံခံ၏ (1999) ဖြန့်ဖြူး။ ဦးနှောက် Res 827: 243-260 ။
Nanmoku T က, Isobe K ကို Sakurai T က, Yamanaka တစ်ဦးက, Takekoshi K ကို Kawakami Y ကို, Goto K နှင့် Nakai T ကယဉ် porcine adrenal medullary နှင့် cortex ဆဲလ်အပေါ် orexin ၏ (2002) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စည်းမျဉ်း Pept 104: 125-130 ။
Nanmoku T က, Isobe K ကို Sakurai T က, Yamanaka တစ်ဦးက, Takekoshi K ကို Kawakami Y ကို, Ishii K ကို Goto K နှင့် Nakai T က (2000) Orexins ယဉ် PC12 ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ catecholamines ပေါင်းစပ်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖိနှိပ်။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community 274: 310-315 ။
Nishino က S, Ripley B, Overeem S က, Lammers GJ, လူ့ narcolepsy အတွက် Mignot အီး (2000) Hypocretin (orexin) ချို့တဲ့ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 355: 39-40 ။
ကြွက် Basal အောက်မှာ pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် orexins ၏ Nowak M က, Hochólတစ်ဦးက, Tortorella ကို C, Jedrzejczak N ကို, Ziolkowska တစ်ဦးက, Nussdorfer GG နှင့် Malendowicz LK (2000) Modulatory ဆိုးကျိုးများ။ Biomed Res 21: 89-93 ။
Nussdorfer GG (1996) medullary chromaffin ဆဲလ်များက adrenal cortical function ကို၏ Paracrine ထိန်းချုပ်မှု။ Pharmacol ဗြာ 48: 495-530 ။
Nussdorfer GG, ရော့စီမိသားစုဆရာဝန်, Malendowicz LK နှင့် Mazzocchi, G (1999) Autocrine-paracrine endothelin system ကို Steroid တစ်မျိုးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ်ရှူးများ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ရောဂါဗေဒ၌တည်၏။ Pharmacol ဗြာ 51: 403-438 ။
Nussdorfer GG, Spinazzi R ကိုနှင့် Mazzocchi, G (2005) Cholecystokinin (CCK) နှင့် adrenal-cortex Secret ။ Vitam Horm 71: 433-453 ။
Ouedraogo R ကို, Näslundအီးနှင့် Kirchgessner AL (2003) ဂလူးကို့အတွက် endocrine ပန်ကရိယကနေ orexin-တစ်ဦး၏လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိ။ ဆီးချိုရောဂါ 52: 111-117 ။
Peyron ကို C, Faraco J ကို, ရော်ဂျာ W က, Ripley B, Overeem S က, Charnay Y ကို, Nevsimalova S က, Aldrich M က, Reynolds က D:, Albin R ကို, et al ။ (2000) အစောပိုင်းစတင်ခြင်း narcolepsy တစ်ဦးအမှု၌တစ်ဦးက mutation နှင့်လူ့ narcoleptic ဦးနှောက်ထဲမှာ hypocretin peptides တစ် generalized မရှိခြင်း။ နတ် Med 6: 991-997 ။
Porkka-Heiskanen T က, Kalinchuk တစ်ဦးက, Alanko L ကို, Huhtaniemi ငါနှင့် Stenberg: D (2004) အမျိုးသမီးကြွက်များ၏ hypothalamus အတွက် Orexin A နှင့် B အဆင့်ဆင့်: အ estrous သံသရာနှင့်အသက်အရွယ်များ၏သက်ရောက်မှုများ။ EUR J ကို Endocrinol 150: 737-742 ။
အထမ်းသမား RA, ချမ်း WN, Coulton S ကို Johns တစ်ဦးက, Hadley က MS, Widdowson K ကို Jerman JC, Brough SJ, Coldwell M က, စမတ်: D, et al ။ (2001) 1,3-Biarylureas အဆိုပါ orexin-1 အဲဒီ receptor ၏ရွေးချယ် nonpeptide ရန်အဖြစ်။ Bioorg Med Chem လက်တ 11: 1907-1910 ။
Pralong လက်ဗွေ, Roduit R ကို, Waeber, G, Castillo အီး, Mosimann က F, Thorens B, နှင့် Gaillard RC (1998) Leptin သာမန်လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက် adrenal gland အားဖြင့်တိုက်ရိုက် glucocorticoid Secret ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 139: 4264-4268 ။
Randeva HS, Karteris အီး, Grammatopoulos DK, နဲ့လူ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ adrenals အတွက် orexin-A နှင့် functional orexin အမျိုးအစား 2001 receptors ၏ Hillhouse EW (2) Expression: adrenal function ကိုနှင့်စွမ်းအင် homeostasis များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ J ကို Clin Endocrinol Metab 86: 4808-4813 ။
Renshaw D နှင့် Hinson JP (2001) Neuropeptide Y ကိုနှင့် adrenal gland: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Peptides 22: 429-438 ။
Rouet-Benzineb P ကို, Rouyer-Fessard ကို C, Jarry တစ်ဦးက, Avondo V ကို, Pouzet ကို C, Yanagisawa က M, Laboisse ကို C, Laburthe M ကများနှင့်အူမကြီးကင်ဆာနှင့် neuroblastoma ဆဲလ်ထဲမှာဇာတိ OX2004 အဲဒီ receptor မှာသို့မဟုတ် recombinant OX1 မှာသရုပ်ဆောင် Voisin T က (1) Orexins အဲဒီ receptor apoptosis inducing အားဖြင့်ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုဖိနှိပ်။ J ကို Biol Chem 279: 45875-45886 ။
စယ် SH, အသေးစား CJ, Dakin CL, အာဘော့ CR, မော်ဂန် DGA, Ghatei MA နှင့် Bloom SR (2001) Vivo နှင့်အထီးကြွက်များတွင်စသည်တို့အတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအတွင်း orexin-တစ်ဦး၏အလယ်ပိုင်းဆိုးကျိုးများ။ J ကို Neuroendocrinol 13: 561-566 ။
Sakurai T က (1999) Orexin နှင့် orexin receptors: နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူအတွက်ဆိုလို။ စည်းမျဉ်း Pept 85: 25-30 ။
Sakurai T က (2005) orexin ၏ဆေးဝါးဗေဒနောက်ပြန်: တစ်ခုမိဘမဲ့ GPCR ထံမှ Integrated ဇီဝြဖစ်စဉ်ရန်။ စည်းမျဉ်း Pept 126: 3-10 ။
Sakurai T က, Amemiya တစ်ဦးက, Ishii M က, Matsuzaki ငါ Chemelli RM, Tanaka H ကို, et al Williams က SC, ရစ်ချတ်ဆန်ဂျာ Kozlowski မိသားစုဆရာဝန်, Wilson က S နဲ့။ (1998) Orexins နှင့် orexin receptors: hypothalamic neuropeptides နှင့်အပြုအမူအစာကျွေးထိန်းညှိကြောင်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell 92: 573-585 ။
Sakurai T က, Moriguchi T က, Furuya K ကို Kajiwara N ကို, Nakamura T က, Yanagisawa က M နှင့် Goto K သည်လူ့ prepro-orexin ဗီဇ၏ (1999) ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို။ J ကို Biol Chem 274: 17771-17776 ။
ရှံဆုန် wk နှင့် Resch ZT (2000) က hypocretin / orexin ပုံပြင်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Endocrinol Metab 11: 257-262 ။
ရှံဆုန် wk နှင့်တေလာဟာ MM (2001) Hypocretin / orexin စသည်တို့အတွက် corticotroph တုန့်ပြန်ဖိနှိပ်။ နံနက် J ကို Physiol 281: R1140-R1145 ။
ရှံဆုန် wk, တေလာဟာ MM, Follwell M ကများနှင့် hypothalamic paraventricular နျူကလိယအတွက်ဖာဂူဆန် AV စနစ် (2002) Orexin လုပ်ရပ်များ: ဇီဝကမ္မအကျိုးဆက်များနှင့်ဆယ်လူလာ Correlate ။ စည်းမျဉ်း Pept 104: 97-103 ။
Siegel JM, Moore က R ကို, Thannickal T ကများနှင့် Nienhuis R ကို (2001) hypocretin / orexin နှင့် narcolepsy ၏သမိုင်းအကျဉ်း။ Neuropsychopharmacology 25: S14-S20 ။
စမတ်: D, Jerman JC, Brough SJ, Rushton SL, Murdock PR စနစ်, Jewitt က F, Elshourbagy NA, အဲလစ်အီး, Middlemiss DN နှင့် FLIPR သုံးပြီးတရုတ်ဟမ်းစတား Ovary ဆဲလ်လိုင်းအတွက် recombinant လူ့ orexin အဲဒီ receptor ဆေးဝါးဗေဒ၏ဘရောင်းက F (1999) စရိုက်လက္ခဏာတွေ ။ br J ကို Pharmacol 128: 1-3 ။
စမတ်: D, Sabido-သည်ဒါဝိဒ်ကို C, Brough SJ, Jewitt က F, Johns တစ်ဦးက, Porter RA နှင့် Jerman JC (2001) SB-334867-တစ်ဦးက: ပထမဦးဆုံးရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်။ br J ကို Pharmacol 132: 1179-1182 ။
adrenal gland ၏ autocrine-paracrine စည်းမျဉ်းထဲမှာ Spinazzi R ကို, Andrey PG နှင့် Nussdorfer GG (2005a) Neuropeptide-Y ကိုနဲ့ Y-receptors ဇီဝကမ္မနှင့် pathophysiological အခြေအနေများအောက်တွင်။ int J ကို Mol Med 15: 3-13 ။
Spinazzi R ကို, Rucinski M က, neri, G, Malendowicz LK နှင့် Nussdorfer GG (2005b) Prepro-orexin နှင့် orexin receptors cortisol-secreting adrenocortical adenomas နှင့် orexins အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်စသည်တို့ cortisol လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အကျိတ်ဆဲလ်ကြီးထွားအတွက်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ J ကို Clin Endocrinol Metab 90: 3544-3549 ။
Spinazzi R ကို, Ziolkowska တစ်ဦးက, neri, G, Nowak M က, Rebuffat P ကို, Nussdorfer GG, Andrey PG နှင့် Malendowicz LK (2005c) Orexins အမျိုးအစား 1 နှင့်အမျိုးအစား2receptors မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်, ယဉ်ကျေးမှုကြွက် adrenocortical ဆဲလ်များ၏ကြီးထွား modulate ဟာ MAPK p42 မှ coupled / p44- နှင့် p38-မှီခိုကက်စကိတ်။ int J ကို Mol Med 15: 847-852 ။
Stricker-Krongrad A နှင့် glucocorticoids အားဖြင့် hypothalamic hypocretin / orexin mRNA ထုတ်ဖော် Beck B က (2002) Modulation ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community 296: 129-133 ။
Taheri S နှင့် Bloom S ကို (2001) Orexins / hypocretins: သိပ္ပံနည်းကျကမ္ဘာကြီးကိုနှိုးထ။ Clin Endocrinol (အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်) 54: 421-429 ။
တေလာဟာ MM နှင့်ရှံဆုန် wk (2003) ကို orexins ၏အခြားဘက်ခြမ်း: endocrine နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ရပ်တွေကို။ နံနက် J ကို Physiol 284: E13-E17 ။
Thannickal TC, Moore က RY, Nienhuis R ကို, Ramanathan L ကို, Gulyani S က, Aldrich M က, Cornford M ကများနှင့် Siegel JM (2000) လူ့ narcolepsy အတွက် hypocretin အာရုံခံအရေအတွက်လျှော့ချ။ အာရုံခံဆဲလျ 27: 469-474 ။
ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin အဲဒီ receptor mRNA ၏ Trivedi P ကို, ယု H ကို, Mac အတွက်က Neil DJ သမား, ဗန် der Ploeg LH နှင့်ဂွမ် XM (1998) ဖြန့်ဖြူး။ FEBS လက်တ 438: 71-75 ။
ဗန်တွင်း Pol AN, Gao xB Obrietan K ကို Kilduff TS နှင့် Belousov AB (1998) Presynaptic နှင့် postsynaptic လုပ်ရပ်များနှင့် neuroendocrine အာရုံခံ၏မော်ဂျူအသစ်တစ်ခု hypothalamic peptide, hypocretin / orexin ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ J ကို neuroscience 18: 7962-7971 ။
Wauters M က, Considine RV နှင့်ဗန်ဟားလ် LF (2000) လူ့ leptin: တစ်ခု adipocyte ဟော်မုန်းတစ်ဦးထံမှ endocrine ဖျန်ဖြေရန်။ EUR J ကို Endocrinol 143: 293-311 ။
Weis M, Abad V, Considine RV, Nieman L နှင့် Rother KI (1999) Lushin လျှို့ဝှက်ချက်ကုရှ၏ syndrome ရောဂါ - နေ့စဉ်ပုံမှန်စည်းချက်မှုနှင့် corticotropin-releasing hormone ကိုပျက်ကွက်သောတုန့်ပြန်မှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab 84: 2075-2079 ။
ဝီလီ JT, Chemelli RM, Sinton CM နှင့် Yanagisawa က M (2001) ကိုစားရန်သို့မဟုတ်အိပ်? နို့တိုက်ကျွေးရေးမနိုး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် Orexin ။ Annu ဗြာ neuroscience 24: 429-458 ။
ဝံပုလွေ, G (1998) Orexins: အစားအစာစားသုံးမှု၏ hypothalamic အားပြိုင်မှုတစ်ခုအသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမိသားစု။ Nutr ဗြာ 56: 172-189 ။
Yamamoto Y ကို, Ueta Y ကို, Hara Y ကို, Serino R ကို, Nomura က M, ရှိဘုယ, ငါသည် Shirahata တစ်ဦးနှင့် Yamashita H ကို (2000) ကြွက်များတွင် orexin / hypocretin ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Mol ဦးနှောက် Res 78: 108-119 ။
အထီးသိုး၏ဦးနှောက်နှင့်အရံတစ်ရှူးအတွက် orexin receptors ၏ Zhang က S နဲ့, Blache: D, Vercoe PE အာဒံ CL, Blackberry, MA, Findlay PA ဆိုပြီး, Eidne Ka နှင့်မာတင် GB ကို (2005) Expression ။ စည်းမျဉ်း Pept 124: 81-87 ။
Ziolkowska တစ်ဦးက, Spinazzi R ကို, Albertin, G, Nowak M က, Malendowicz LK, Tortorella ကို C နှင့် Nussdorfer GG (2005) Orexins သီးသန့် OX1 အဲဒီ receptor မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်, ယဉ်ကျေးမှုကြွက်နှင့်လူ့ adrenocortical ဆဲလ်ကနေ glucocorticoid လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း။ J ကို Steroid တစ်မျိုးထဲကဓာတုပစ်စညျး Mol Biol 96: 423-429 ။
Hypocretin (Orexin) ကို Murine Prefrontal Cortex ၏ Fr2 တိုင်းဒေသကြီး၏အလွှာ V ကိုအတွက်အစာရှောင်ခြင်း-Spike Interneurons မှအချိုမှု Input အားထိန်းညှိ Cereb Cortex မေလ 1, 2015 25: 1330-1347
Dual orexin receptor antagonists - အိပ်စက်ခြင်းရောဂါများကိုကုသရာတွင်ကတိပေးသောအေးဂျင့်များ int J ကို Neuropsychopharmacol ဇန်နဝါရီလ 1, 2014 17: 157-168
အဆိုပါ orexinergic / hypocretinergic စနစ်၏ဇီဝကမ္မဗေဒ: 2012 အတွက်ပြန်လည်လည်ပတ် နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ cell Physiol ။ ဇန်နဝါရီလ 1, 2013 304: C2-C32
တိုးမြှင့် Glucocorticoid receptor ဖော်ပြမှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖျန်ဖြေ SPRET / EI ကြွက်တွေရဲ့ LPS Resistance J ကို Biol Chem အောက်တိုဘာလ 1, 2010 285: 31073-31086
မျက်စိခွဲစိတ်ခံယူလူနာအတွက် propofol-fentanyl မေ့ဆေးစဉ်အတွင်းပလာစမာ orexin တစ်ဦးကပြောင်းလဲမှုများ br J ကို Anaesth ဇွန်လ 1, 2010 104: 723-727
5-HTT Knock-Out အမျိုးသားကြွက်တွေအတွက်ပြောင်းလဲအိပ်စက်ခြင်း Homeostasis တွေဆက်ရှိနေပြီးနောက်စိတ်ဖိစီးမှု: Hypocretins များအတွက်တစ်ဦးကအခန်းက္ပ ဂျေ neuroscience ။ ဒီဇင်ဘာလ 9, 2009 29: 15575-15585
Neuroendocrine Proopiomelanocortin အာရုံခံ Hypocretin / Orexin အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် ဂျေ neuroscience ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2009 29: 1503-1513
အဆိုပါ Orexins / Hypocretins နှင့် Schizophrenia Schizophr Bull နိုဝင်ဘာလ 1, 2007 33: 1277-1283
လူ့ adipose တစ်ရှူးအတွက် Orexin အဲဒီ receptor စကားရပ်: orexin-A နှင့် orexin-B က၏ဆိုးကျိုးများ J ကို Endocrinol အောက်တိုဘာလ 1, 2006 191: 129-136